BY YeYint Nge ... 11/25/20140comment
ကာချုပ်ပြောကြားချက်အပေါ် ပြည်လုံးကျွတ် ဆန္ဒခံယူပွဲလုပ်ရန် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် တုံ့ပြန်
အခြေခံဥပဒေ ပြင်ဆင် ရေးသော့ချက်ဖြစ်သော ပုဒ်မ ၄၃၆ပြင်ဆင်ရေးနှင့် ပတ်သက်၍ တပ်မတော် ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်၏ ပြောကြားချက်အပေါ် ပြည်လုံးကျွတ် ဆန္ဒခံယူပွဲ ပြုလုပ်၍ လူထုအဆုံးအဖြတ်ရယူရန် ပြောကြားခဲ့ခြင်း ဖြစ်သည်။
အဆိုပါ ပုဒ်မ ပြင်ဆင်ရေး အတွက် လူဦးရေ ငါးသန်းက လက်မှတ်ရေးထိုးတောင်းဆိုထားသော်လည်း ကျန်ရှိသော လေးဆယ့်ခြောက်သန်း၏ ဆန္ဒကိုလည်း လေ့လာရန်လိုကြောင်း တပ်မတော်ကာကွယ်ရေး ဦးစီးချုပ် ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး မင်းအောင်လှိုင် ပြောကြားခဲ့မှုအပေါ် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်က အထက်ပါ အတိုင်း တုံ့ပြန်ပြောကြားခဲ့ခြင်း ဖြစ်သည်။
‘‘အကယ်၍ မဲဆန္ဒငါးသန်း ပေါ့။ ဒီငါးသန်းရဖို့အတွက် ဘယ် လိုကောက်လဲ ပြုလဲ ကျွန်တော် တို့ မသိဘူး။ ဘယ်လောက်ထိ ခိုင်မာမှုရှိမယ်ဆိုတာလည်း ကျွန် တော်မပြောနိုင်ပါဘူး။ ဒီပမာဏ ဟာ ကျွန်တော်တို့ ဆုပ်ကိုင်ထား တဲ့ လူဦးရေ ၅၁ သန်းနဲ့ဆိုရင် တော့ ဆယ်ပုံတစ်ပုံပဲ ရှိတာပေါ့။ ကျန်တဲ့သူတွေရဲ့ ဆန္ဒတွေကို လည်း ကျွန်တော်တို့ ကြည့်ဖို့ လို မှာပေါ့’’ ဟု ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး မင်း အောင်လှိုင်က ပြောသည်။
‘‘ဒီလိုဆိုရင် ပြည်လုံးကျွတ် ပြည်သူ့ဆန္ဒခံယူပွဲ လုပ်လိုက် လေ။ ကျွန်မတို့က အဆင်သင့်ပဲ’’ ဟု VOA ၏ သီးခြားအင်တာဗျူး အစီအစဉ်တွင် ဒေါ်အောင်ဆန်း စုကြည်က တုံ့ပြန်ပြောကြားခဲ့ သည်။
ယင်းပုဒ်မပြင်ဆင်နိုင်ရေးအ တွက် အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ ချုပ် ပါတီ (NLD) နှင့် ၈၈ မျိုး ဆက် (ငြိမ်း/ပွင့်)တို့ ဦးဆောင်၍ အသိပညာပေးဟောပြောမှုများ ပြည်သူ့ဆန္ဒခံယူမှုများ ပြုလုပ် ခဲ့ရာ ပြည်သူ ငါးသန်းကျော်က ပြင် ဆင်လိုကြောင်း ထောက်ခံလက် မှတ်ရေးထိုးခဲ့ကြသည်။
အခြေခံဥပဒေပြင်ဆင်ရေး အတွက် လွှတ်တော်တွင်း ဆွေး နွေးမှုများ ပြုလုပ်နေရာတွင် အဓိ ကအရေးကြီးသော ပုဒ်မ ၄၃၆ ပြင်ဆင်ရေးအတွက် ရွေးကောက် ခံအရပ်သားလွှတ်တော်ကိုယ်စား လှယ်များက ပြင်ဆင်ရေးကို ထောက်ခံဆွေးနွေးကြသော်လည်း တပ်မ တော်သားလွှတ်တော်ကိုယ်စား လှယ်များကမူ ယင်းပုဒ်မ ပြင ဆင်ရန် အပြင်းအထန်ငြင်းဆန် ဆွေးနွေးခဲ့ကြသည်။
‘‘ဒီပုဒ်မက အခြေခံဥပဒေရဲ့ Key ပဲဗျ။ အခုက ဘယ်လိုဖြစ်နေ လဲဆိုတော့ ကားတစ်စီးက စက် ပျက်နေတယ်ဗျာ။ ပြင်ဖို့ကို စက် ဖုံးဖွင့်ပြီး ပြင်မှရမယ်။ အဲဒီတော့ ပျက်နေတာကို ပြင်ဖို့ လက်ခံ တယ်။ ဒါပေမဲ့ စက်ဖုံးတော့ ဖွင့် မပေးနိုင်ဘူးဆိုတဲ့ ပုံစံမျိုးဖြစ်နေ တယ်’’ ဟု အမျိုးသားလွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ် ဦးလှဆွေက ပြော ကြားထားသည်။
ကိုထင်လင်းဦးကို ဖမ်းဆီးအရေးမယူခဲ့ရင် ဆူပူမှုတွေဖြစ်လာနိုင်တယ်လို့ ဦးဝီရသူကသုံးသပ်
ကိုထင်လင်းဦးကို ဖမ်းဆီးအရေးမယူခဲ့ရင် ဆူပူမှုတွေဖြစ်လာနိုင်တယ်လို့ ဦးဝီရသူကသုံးသပ်တယ်။ ပြီးတော့ NLD ပါတီကိုပါ စာထုတ်ပြီး ကန့်ကွက်ခဲ့တယ်၊
ဦးဝီရသူဟာ နိုင်ငံရေးနယ်ပယ်မှာ အစွန်းရောက်သမားတစ်ဦးအဖြစ်ထင်ရှားလာတဲ့အတွက် ဦးဝီရသူရဲ့ ထုတ်ပြန်ချက်ကို အများစုသတိပြုမိကြတာမဆန်းပါဘူး၊
တကယ်တော့ အစွန်းရောက်ဘာသာရေးသမားတွေကြီးစိုးတဲ့ အမှောင်နယ်မြေတွေမှာပဲ ဘာသာရေးကို ဝေဖန်ရင်၊ ဒါမှမဟုတ် စော်ကားတယ်လို့ယူဆရင် ပြင်းပြင်းထန်ထန်အပြစ်ပေးလေ့ရှိတယ်၊ ဒီလိုစိတ်သဘောထားသေးသိမ်မှုနဲ့ လက်စားခြေမှုတွေအရင်းခံတဲ့ ဆူပှုမှုတွေဟာ မြန်မာနိုင်ငံလို ကမ္ဘာမှာ တစ်ခုတည်းသော ထိတ်တန်းဗုဒ္ဓဘာသာသာနိုင်ငံမှာ ဖြစ်သင့်ပါရဲ့လား၊ သူများဘာသာတွေတောင်လုပ်နေတယ်၊ ကိုယ့်ဘာသာမှာ မလုပ်ရတော့ဘူးလားလို့ဆင်ခြေကန်ရင် သူများဘာသာတွေဘယ်လောက်ပဲလုပ်လုပ်ကိုယ့်ဘာသာရေးမှာဒါတွေလုံးဝမလုပ်သင့်ဘူးလို့ ပြောရမှာပဲ၊ သူများတွေ မစင်စားတိုင်း ကိုယ်က လိုက်စားရမှာလား၊
သေချာနားထောင်ကြည့်တော့ ဦးထင်လင်းဦးဟာ သင်္ကန်းဝတ်အကြမ်းဖက်သမားတွေကို တွယ်ထည့်လိုက်တာရယ်၊ စကားလုံးအသုံးအနှုန်းကြမ်းသွားတာရယ်ကလွဲပြီး မှားတာမပါပါဘူး၊ သူကိုယ်တိုင်လည်း ဒီအဖြစ်အပျက်ကနေသင်္ခန်းစာယူပြီး တောင်းပန်နေပြီပဲ၊ ဒါကိုမှခွင့်မလွှတ်နိုင်ပဲ အငြိုးတကြီးနဲ့ ဖမ်းဆီးအရေးယူဖို့ တိုက်တွန်းတာဟာ ဗုဒ္ဓဘာသာအတွက် ရှက်စဖွယ်ပါပဲ၊ သူ့အစားဗုဒ္ဓဘာသာတစ်ဦးအနေနဲ့ ရှက်လည်းရှက်မိတယ်၊ ဦးထင်လင်းဦးမှာလည်းကိုယ်ပိုင်မိသားစုနဲ့ သူ့စောင့်ရှောက်မှုကိုလိုအပ်နေတဲ့ ပတ်ဝန်းကျင်တစ်ခုမုချရှိနေမှာပါပဲ၊
ဒါပေမယ့် ဦးဝီရသူဟာ ဦးထင်လင်းဦးကိုဖမ်းဆီးအရေးယူဖို့ ခြိမ်းခြောက်မှုဆန်ဆန် သဘောထားထုတ်ပြန်တာဟာ ဦးထင်လင်းဦးတင်မက သူ့ရဲ့မိသားစုနဲ့ပါရှင်ကွဲကွဲအောင်၊ ကိုယ်စိတ်နှလုံးညိုးချုံးအောင် လုပ်နေတာပဲမဟုတ်ပါလား၊
ဦးဝီရသူဟာ မေတ္တာတရားကိုအရင်းခံတဲ့ ဗုဒ္ဓဘာသာကို ပုံဖျက်နေပြီလို့ထင်ပါတယ်၊
ဦးဝီရသူဟာ တရားဟောပလ္လင်ပေါ်မှာထိုင်တာနဲ့ သင်္ကန်းရုံတာကလွဲပြီးရဟန်းတစ်ပါးမလုပ်သင့်၊ မလုပ်ထိုက်တဲ့လုပ်ရပ်ကို တွင်တွင်ကြီးလုပ်လာခဲ့တာကြာပါပြီ၊ တသက်နဲ့တကိုယ် ဦးဝီရသူ နိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းတရားဟောတာ မကြားခဲ့ဘူးပါဘူး။
မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ အခြေအနေဟာ စဉ်းစားတိုင်းယူကြုံးမရဖြစ်ရတယ်၊ ပညတ်တွေနဲ့ဓါတ်သက်တွေလွဲနေတယ်၊ ဥပမာ မြန်မာ့တပ်မတော်လို့ ကြားလိုက်ရင် မနှစ်မြို့မှု၊ အထင်သေးမှု၊ မလုံခြုံမှု စတဲ့ခံစားမှုတွေပေါ်လာတယ်၊
မဘသ လို့ကြားလိုက်ရရင် အဓိကရုဏ်းတွေ၊ ဒေါသထွက်နေတဲ့လူအုပ်ကြီးတွေ၊ မျက်နှာထားတင်းတင်းတွေ မြင်ယောင်လာတယ်၊ ဒါတွေဟာ ခင်ဗျားတို့ရဲ့ လုပ်ရပ်ကိုမှီပြီးဖြစ်လာတဲ့ ရလာဒ်တွေပဲ၊ ဒါမှမဟုတ် ခင်ဗျားတို့ရဲ့ စေတနာကိုနားမလည်တဲ့ နလပိန်းတုန်းပြည်သူတွေအဖြစ်သတ်မှတ်ချင်လည်းသတ်မှတ်ကြပေါ့၊
နိုင်ငံက ဆင်းရဲမွဲတေလွန်းပြီး ရက်စက်ကြမ်းကြုတ်တဲ့စစ်အစိုးရအောက်မှာ ဗုဒ္ဓတရားရဲ့အေးမြမှုရှိလို့သာ သင့်တင့်လျောက်ပတ်စွာနှလုံးသွင်းနေနိုင်ခဲ့တာ၊ ဒီဘာသာတရားပါ ပုံဖျက်ခံရတော့မယ်ဆိုရင်တော့ မြန်မာနိုင်ငံဟာ ပတိရူပ ဒေသ၀ါသောစ (သင့်တင့်လျောက်ပတ်သောအရပ်မှာနေရခြင်းသည်မင်္ဂလာတစ်ပါး) ဟုတ်ပါရဲ့လားလို့ မေးခွန်းထုတ်ရပါတော့မယ်။ ပြည်သူတွေလက်ချင်းချိတ်ပြီး အစိုးရနှိက်စက်မှုနဲ့ မဘသရဲ့ သွေးထိုးမှုကို အတူတူရင်ဆိုင်ကြတာပေါ့၊
စာရေးသူသည် ၁၉.၁၁.၂၀၁၄ ရက်နေ့က
သတင်းထူးတခု ကို ရခဲ့သဖြင့်မြန်မာနိုင်ငံသားများအတွက်
ထိုနေ့က အကင်ဆိုင်တွင် လှလှပပ
အသားလုံးများ ၊ ကြက်အူချောင်းများကို
စာရေးသူကလည်း စားချင်တာကို ခြင်းလေးထဲထည့်ပြီး
တရုတ်ရဲများက ဆိုင်ရှင်အား လက်ထိပ်ခတ်ပြီး
စပ်စုချင်စိတ်ကြောင့် မသိမသာ အကဲခတ်၍
ကြည့်မိရာ ဆိုင်အတွင်းထဲတွင် ဓါတ်ပုံရိုက်
မှတ်တမ်းယူပြီး ရှာဖွေပုံစံဖြင့် ပစ္စည်းတချို့ကို
အသားကင် ၊ အသားချောင်းများ
ထိုအချိန်တွင် တရုတ်ရဲများက စားရေးသူရှိသည့်ဖက်ကို
လာပြီး တရုတ်လိုပြောနေရာ ကိုယ်ကလဲ
ဘုန်းဘုန်း ပြန်ကြစို့ တရုတ်ရဲကပြောနေတာ
ဆိုင်ပိတ်သွားပြီ ပြန်ကြတော့ လို့
စာရေးသူမှ မစားမသောက်ပဲ ပြန်လာခဲ့ရပါတယ်။
ဒါနဲ့ပဲ မိတ်ဆွေဖြစ်သူက တခြားဆိုင်ကို
လိုချင်တာထည့်ပြီး မစားချင် စားချင်ဖြင့်
မြင်နေမိတော့ စားရတာစိတ်မပါလှပါဘူး ။
ဆိုင်ရှင်ကြီးရဲ့မျက်နှာမှာတော့ ပြုံးပြုံး ပြုံးပြုံး နဲ့
ရှင်းပြနေတဲ့ပုံစံကို နားလည်ပေးတဲ့ အကြည့်နဲ့
ပြုံးပြုံးကြီး ကြည့်နေတော့တာပါပဲ. . . .
တပည့်တော် ပြစရာရှိတာလေး ပြချင်လို့ပါဆိုပြီး
ထမင်းဆိုင်ရဲ့အပေါ်ထပ်ကို တက်သွားပါတော့တယ် . .။
ကိုင်ပြီးဆင်းလာပြီး စာရေးသူရဲ့ဘေးကို ကျကျနနထိုင်လို့
အရေးကြီးတဲ့ ဗဟုသုတကို ဘာသာပြန်
အစားအသောက် အသုံးအဆောင် အစီးအနင်းများကို
တရုတ်အစိုးရမှ တရုတ်ကုန်ထုတ်လုပ်သူ လုပ်ငန်းရှင်များအား
မောင်းနှင်နိုင်သည့် အာမခံချက်မရှိပါ ။
မပေးသလို တရုတ်နိုင်ငံသားများအား ရောင်းမိပါက
အထူးသဖြင့် အကင်များ ၊ အသားလုံးများ
ထိုအစားအသောက်တွင် Saraparitic ဟုခေါ်သော
သာအိမ်ရှုံ့၍ ကလေးမျိုးဆက်ကို ပျက်ဆီးစေနိုင်ကြောင်း
ကုလသမဂ္ဂ W.H.O အစီရင်ခံစာမှာ ဖော်ပြထားပါသည်။
မျိုးဆက်ပြတ်တောက်၍ လူမျိုးတုန်းရန် ၁၀၀%
ရုရှားနိုင်ငံမှ ထောက်လှမ်းရေးအဖွဲ့က တွေ့ရှိခဲ့သည်ဟု
စာရေးသူ ။ ။ အရှင်ဇဝန (သရက်တပင် တောရကျောင်း)
BY YeYint Nge ... 11/24/20140comment
၂၀၁၅ ရွေးကောက်ပွဲအတွက် နိုင်ငံရေးလက်နက်တခု
မျိုးစောင့်ဥပဒေသည် အမျိုးဘာသာရေးထက်စာရင်၂၀၁၅ ရွေးကောက်ပွဲအတွက် နိုင်ငံရေးလက်နက်တခု
( ကြံ့ခိုင်ရေးအမတ် ဦးလှဆွေ )
ကျမတို့က ဖိတ်ရင် လည်း ပါဖို့ အဆင်သင့်ပါပဲ
VoA ။ ။
ဒါဆို တခြားအရေးကြီးတဲ့ကိစ္စတခုဖြစ်တဲ့ အပစ်အခတ်ရပ်စဲရေးကိစ္စတွေ- အမျိုးသား ဒီမိုကရေစီ အဖွဲ့ချုပ်နဲ့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့ပါဝင်မှုနဲ့အသံ ကျနော်တို့ သိပ်မကြား ရဘူး။
ကျမတို့ကိုပါဝင်ဖို့လည်း မဖိတ်ခဲ့ဘူးလေ၊ အဲဒါကြောင့်မို့လို့ ကျမတို့က လေးပွင့်ဆိုင်မှာ ဆိုရင် ဟိုလူထားပစ်ခဲ့တယ်၊ ဒီလူ့ထားပစ်ခဲ့တယ်လို့ပြောပေမယ့် ကျမတို့က ဒီ အပစ် အခတ်ရပ်စဲရေးနဲ့ပတ်သက်လို့ ကျမတို့ ဘာလို့မပါရတာလဲလို့ ကျမတို့ မပြောပါဘူး။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ အဓိကကျတဲ့ ပုဂ္ဂိုလ်တွေက အဖွဲ့အစည်းတွေက အချင်းချင်းဆွေးနွေးပြီးတော့ အပစ်ခတ်ရပ်စဲရေး သဘောတူညီမှု ယူချင်တယ်ဆိုပြီး ကြိုးစားနေတဲ့အချိန်မှာ ကျမတို့ မပါရကောင်းလား ဆိုပြီး ကျမတို့ တခါမှ မပြောဖူးပါဘူး။
ဘာဖြစ်လို့မပါရတာလဲလို့ မေးလို့ရှိရင်တော့ ကျမတို့ ရှင်းရှင်းပဲပြောပါတယ်။ ဟိုဘက် ဒီဘက် နှစ်ဘက်စလုံးက မဖိတ်ဘူး။ ဖိတ်ရင်တော့ ပါရမှာပေါ့၊ ကျမတို့က ဖိတ်ရင် လည်း ပါဖို့ အဆင်သင့်ပါပဲ။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ အပစ်အခတ် ရပ်စဲရေး ဆိုတာ ဟာ နောင် ငြိမ်းချမ်းရေးအတွက် အရေးကြီးတဲ့ကိစ္စဖြစ်လို့။
တဖက်နဲ့ တဖက်ဆွေးနွေးပြီးတော့ အဖြေရှာနေတဲ့အချိန်မှာ ကျမတို့ မပါရကောင်း လား ဆိုတာ ကျမတို့အတွက် နံပါတ် (၁) မဟုတ်ပါဘူး။ ဒီဆွေးနွေးနေတဲ့ သူတွေ က ပြည်သူ အတွက် ငြိမ်းချမ်းရေး ရနိုင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင် ကျမတို့အနေနဲ့ အင်မတန် မှပဲ ၀မ်းသာမှာ ဖြစ် ပါတယ်။
ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေ ပုဒ်မ (၄၃၆) ပြင်ဆင်ရေးမှာ အခက်အခဲတွေ ရှိနေသေးပေမယ့် ရအောင်ညှိနှိုင်းသွားရမှာပဲ ဖြစ်ကြောင်း အပြောင်းအလဲတွေ လုပ်ဖို့လိုနေတယ်ဆိုတာသိရင် မြန်မြန်ဆန်ဆန် ပြုပြင်ပြောင်းလဲတဲ့ သတ္တိရှိဖို့လိုအပ်ကြောင်း ဗွီအိုအေမြန်မာပိုင်းနဲ့ သီးသန့် တွေ့ဆုံမေးမြန်းခန်းမှာ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်က ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ အပြည့်အစုံကို နားဆင်ဖတ်ရှုနိုင်ပါတယ်။
ဦးသန်းလွင်ထွန်း။ ။ အခု မကြာသေးခင်ရက်ပိုင်းအတွင်းကလည်း သမ္မတကြီးဦးသိန်းစိန်နဲ့ ကျနော် တွေ့ဆုံခဲ့ပါတယ်။ တပ်မတော်ကာကွယ်ရေး ဦးစီးချုပ်နဲ့လည်း ကျနော် တွေ့ဆုံခဲ့ပါတယ်။ သူတို့ရဲ့သဘောအရဆိုလို့ရှိရင်တော့- အထူးသဖြင့် တပ်မတော်ရဲ့သဘောအရ ဆိုလို့ရှိရင်တော့ ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေပြင်ဆင်ရေး ၄၃၆ ကို မပြင်တဲ့ဘက်ကပဲ ခိုင်ခိုင်မာမာရပ်တည်တယ်ဆိုတဲ့ ပုံစံရှိပါတယ်။ အဲဒီတော့ ဒီအခြေအနေဟာ ပြင်ဆင်ဖို့ လွယ်နိုင်ပါအုံးမလား၊ ဖြစ်နိုင်ပါအုံးမလားဆိုတာ သုံးသပ်ပေးပါလား။
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်။ ။ ကျမတို့ ဒီအလုပ်စလုပ်ကတည်းက လွယ်နိုင်မယ်လို့တော့ ဘယ်တုန်းကမှ မသုံးသပ်ခဲ့ပါဘူး။ ဖြစ်နိုင်မယ်ဆိုတာတော့ အဓိကယုံကြည်ပါတယ်။ ဘယ်တော့ဖြစ်မယ်ဆိုတာတော့ ဒီဟာက မေးခွန်းရှိတာပေါ့နော်၊ အနှေးနဲ့အမြန်ပေါ့။ ဒါပေမယ့် မြန်လေလေ နိုင်ငံအတွက် ကောင်းလေလေပဲ။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ ပြင်ဖို့လိုတဲ့ကိစ္စတွေကို မြန်မြန်ပြင်ရဲတဲ့သတ္တိရှိရမယ်။ မြန်မြန်ပြင်နိုင်တဲ့အရည်အချင်း ကျမတို့မှာ အားလုံးလိုတယ်။ အဲဒီတော့ မြန်လေ၊ တိုင်းပြည် မနာလေပဲ။
ဦးသန်းလွင်ထွန်း။ ။ ဟုတ်ကဲ့ခင်ဗျ။ ဒီနေရာမှာ ပြင်ဆင်ရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ မူကြမ်းလေးတွေ ဆွေးနွေးနေကြတာပေါ့။ ဆွေးနွေးတဲ့နေရာမှာ ဆွေးနွေးတဲ့အဓိကအကြောင်းရင်းတွေက တပ်မတော်သားကိုယ်စားလှယ်တွေရဲ့ မဲဆန္ဒတွေကို ကျော်လွန်ပြီးတော့ လုပ်ပိုင်ခွင့်ပုံစံမျိုး သဘောမျိုး ဖြစ်နေတဲ့အတွက်ကြောင့် တပ်မတော်က “ခါးခါးသည်းသည်း” ဖြစ်နေတယ်ဆိုတဲ့ သုံးသပ်ချက်တွေလည်း ရှိပါတယ်။ ဆိုတော့ ဒီလိုသာ မညှိနှိုင်းနိုင်ဘူးဆိုလို့ရှိရင် ဘယ်လိုနည်းလမ်းနဲ့ဖြစ်အောင် အတိုးအလျှော့လုပ်လို့ ရနိုင်မလဲခင်ဗျ။
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်။ ။ ခုနက “ညှိနှိုင်းတယ်”-ဆိုတဲ့စကားကို သုံးသွားတယ်၊ ဒါကြောင့်မို့လို့ ညှိနှိုင်းဖို့ NLD က အစဉ်တစိုက်တောင်းခံခဲ့တာပါ။ အခုမှ တောင်းတာလည်း မဟုတ်ပါဘူး၊ မနေ့တနေ့ကမှ၊ အရင်တလ နှစ်လကမှ မဟုတ်ပါဘူး။ NLD က တစိုက်မတ်မတ်နဲ့ ‘နိုင်ငံရေးအရ အဖြေရှာဖို့ဆိုတာ ဆွေးနွေးရမယ်၊ ညှိနှိုင်းရမယ်၊ တိုင်ပင်ရမယ်ဆိုတာ’ အဲဒီမူအပေါ်မှာ ရပ်တည်ခဲ့တယ်။ အခု ကျမဆိုလို့ရှိရင်လည်း အရင်နှစ်စောစောပိုင်းကတည်းက လေးပွင့်ဆိုင် တွေ့ဆုံဆွေးနွေးပွဲဆိုတာ တောင်းခဲ့တဲ့ဟာ-ဟာ ဒီလိုပြဿနာတွေကို ပြေလည်အောင် ကြိုတင်ပြီးတော့ လုပ်ဖို့ပါ။ အခုနကပြောသွားတဲ့ အထဲမှာ “ခါးခါးသည်း”-ဆိုတဲ့အသုံးအနှုန်းကို သုံးသွားတယ်နော်၊ အဲဒီလို ခါးခါးသည်းဆိုတဲ့ ပုံစံတွေ မပေါ်စေချင်လို့ တဘက်နဲ့တဘက် ညှိနှိုင်းပြီးတော့ သိမ်မွေ့အောင်၊ ချောမွေ့အောင် လုပ်ချင်တာပါ။
(အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် ဥက္ကဋ္ဌ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကို နေပြည်တော်မှာရှိတဲ့ နေအိမ်မှာ ဗွီအိုအေ မြန်မာပိုင်းဌာနမှူး ဦးသန်းလွင်ထွန်းက လွန်ခဲ့တဲ့ နာရီပိုင်းအတွင်း တွေဆုံမေးမြန်းခဲ့တာပါ။ အပြည့်အစုံကို ည (၉) နာရီ ရေဒီယို အစီအစဉ်မှာ နားဆင်ကြရပါမယ်။)
မြန်မာနိုင်ငံ ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်နာယက သူရဦးရွှေမန်းက ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေပြင်ဆင်ရေးနဲ့ ပြင်ဆင်မှုတွေဟာ လာမယ့် ၂၀၁၅ ရွေးကောက်ပွဲ အပြီး ၂၀၁၆ နှစ်ဆန်းပိုင်းမှာမှ ဖွဲ့စည်းမယ့် လွှတ်တော် အသစ်မှာ အတည်ပြုပေးရမယ်ဆိုတဲ့အကြောင်း ဗွီအိုအေကို သီးသန့် ထပ်မံ ရှင်းလင်းခဲ့ပါတယ်။အရေးကြီးတဲ့ ပြင်ဆင်မှုတွေဖြစ်တဲ့အတွက် ဥပမာအားဖြင့် ပြည်နယ် အစိုးရ၀န်ကြီးချုပ်ခန့်အပ်မှုမျိုး၊ တရားသူကြီး အဖွဲ့ ရွေးချယ်မှုမျိုး စတဲ့ ကိစ္စမျိုးတွေမှာ အခု လွှတ်တော်သက်တမ်း အတွင်း ရုတ်တရက်ပြင်ဆင်လိုက်ရင် လက်ရှိ အစုိးရတရားရေး ကဏ္ဍ စတာတွေမှာရှုပ်ထွေးမှုတွေ ဖြစ်လာလိမ့်မယ်လို့ သူရဦးရွှေမန်းက ပြောပါတယ်။ လက်ရှိ လွှတ်တော်တွင်း ဆွေးနွေးနေတဲ့ထဲမှာ ပုဒ်မ (၅၉) (စ) ပြင်ဆင်ရေးပါ တပါတည်းပါတာမို့ အကယ်၍ ပြင်ဆင်ရေး အတည်ပြုခဲ့မယ် ဆိုရင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်အနေနဲ့ ဒုတိယသမ္မတအဖြစ် အမည်စာရင်း တင်သွင်းခွင့် သမ္မတအဖြစ် ရွေးချယ်ခံခွင့် ရှိမရှိ ဆိုတာတွေကိုပါ နောက်လာမယ့် လွှတ်တော်အသစ်အစပိုင်းမှာ တပါတည်း အတည်ပြုပေးဖို့ ရနိုင်မှာ ဖြစ်တယ်လို့ပြောပါတယ်။ ဗွီအိုအေ ဌာနမှူး ဦးသန်းလွင်ထွန်း က နေပြည်တော်လွှတ်တော်မှာ သွားပြီး တွေ့ဆုံမေးမြန်းခဲ့တာပါ။
ဦးသန်းလွင်ထွန်း။ ။ မင်္ဂလာပါ ဥက္ကဋ္ဌကြီး ခင်ဗျာ။ အခု လာမယ့် ၂၅ ရက်နေ့ အထိ အရေးတကြီး ဆွေးနွေးနေကြတဲ့အကြောင်းအရာက ဒီ လွှတ်တော် ဖွဲ့စည်းပုံ အခြေခံဥပဒေမှာ ပြင်ဆင်ရေးမှာ အဓိကကျတဲ့ ပုဒ်မ ၄၃၆ ပြင်ဆင်ရေးမှာ အကြိတ်အနယ် ညှိနှိုင်းနေကြတဲ့ အကြောင်းအရာလေးတွေ ရှိပါတယ်။ အဲဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီး ဥက္ကဋ္ဌကြီးကိုယ်တိုင်လည်း သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲတခုမှာ ဒီပြင်ဆင်မှုတွေဟာ ၂၀၁၅ ရွေးကောက်ပွဲ အပြီး လာမယ့် လွှတ်တော် သက်တမ်းကျမှ အကောင်အထည်ပေါ်လာမယ်ဆိုတဲ့ သဘောမျိုးကို အပြင်ဘက်မှာ နားလည်မှုတွေ ရှိနေပါတယ်။
အဲဒီတော့ အဲဒီကိစ္စကို ဥက္ကဋ္ဌကြီး အနေနဲ့ အရင်ဆုံး နည်းနည်းလေး ရှင်းပြပါလားခင်ဗျ။
သူရ ဦးရွှေမန်း။ ။၂၀၀၈ ဖွဲ့စည်းပုံ အခြေခံဥပဒေဟာ ၂၀၀၈ ခုနှစ် မေလမှာ Referendum (ပြည်သူ့ဆန္ဒခံယူပွဲ) လုပ်ပြီး အတည်ပြုခဲ့တယ်။ ဒီဥပဒေဟာ ၂၀၁၀ ရွေးကောက်ပွဲ ပြုလုပ်ပြီး ရွေးကောက်ပွဲပေါ်က ရလဒ်တွေကို မူတည်ပြီး ၂၀၁၁ ခုနှစ် ဇန်န၀ါရီလ ၃၁ ရက်နေ့မှာ ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော် ကျင်းပတယ်။ အဲဒီ ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော် ကျင်းပတဲ့အချိန်ကျမှ ၂၀၀၈ ခုနှစ် ဖွဲ့စည်းပုံ အခြေခံဥပဒေက အသက်ဝင်ပါတယ်။ အဲဒါကြောင့် အခု လွှတ်တော်ထဲ မှာ ဆွေးနွေးနေတဲ့ ဖွဲ့စည်းပုံ ပြင်ဆင်ရေးဆိုင်ရာ ကိစ္စရပ်များဟာ ဒီလ ၂၅ ရက်နေ့မှာ ဆွေးနွေးပွဲ ပြီးဆုံးမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
အဲ့ဒီနောက် ဆက်လက်လုပ်ဆောင်ရမယ့် ကိစ္စက ဥပဒေကြမ်းပြုစုရေး ကိစ္စ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီဥပဒေကြမ်းပြုစုရေးကို ဖွဲ့စည်းပုံ အခြေခံဥပဒေပုဒ်မ ၄၃၃၊ ၄၃၄၊ ၄၃၅၊ ၄၃၆ နဲ့ အညီ လွှတ်တော်ကိုတင်ပြရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ အဲဒီအပိုင်းကတော့ လာမယ့် ၁၂ ကြိမ်မြောက် ပုံမှန် အစည်းအဝေးမှာ လွှတ်တော်တွင်းမှာ ဆုံးဖြတ်ကြမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
ဦးသန်းလွင်ထွန်း။ ။လွှတ်တော်ထဲမှာ မဲခွဲကြမယ်ဆိုတဲ့သဘောပေါ့။
သူရဦးရွှေမန်း။ ။ မဲခွဲကြမယ်။ မဲခွဲကြမယ်။ အဲလိုမဲခွဲပြီးတော့ ရလာမယ့် အဖြေပေါ် မူတည်ပြီးတော့ တချို့ဥပဒေတွေဟာ လွှတ်တော်တွင်းနဲ့ပဲ ပြီးသွားမယ်။ တချို့ ဥပဒေတွေကတော့ လူထုဆန္ဒခံယူပွဲ ဆက်လက်လိုအပ်မယ်။ အဲဒီအပိုင်းကျတဲ့ အခါကျတော့ လာမယ့် ၂၀၁၅ မေလ အတွင်းမှာ အပြီးလုပ်မယ်လို့ လျာထား သတ်မှတ်တယ်။ အဲဒီက ထွက်ပေါ်လာတဲ့ ပြဌာန်းချက်များသည် ဖွဲ့စည်းပုံ အခြေခံဥပဒေ ပြင်ဆင်ဖို့အတွက် အတည်ဖြစ်သွားပြီ။ သို့ရာတွင် ဒီအတည်ဖြစ်ပေ မယ့် အသက်ဝင်လှုပ်ရှားဖို့ကတော့ ၂၀၁၅ ရွေးကောက်ပွဲအပြီး လွှတ်တော်များ ပြန်လည်ဖွဲ့စည်းပြီး ပထမဆုံးအကြိမ်၊ ပထမဆုံးရက် လွှတ်တော် ကျင်းပတဲ့ အချိန်မှာ အသက်ဝင်သွားမယ်။ အသက်ဝင်သွားတဲ့အတွက် အဲဒီအတိုင်းပဲ နောက်ဆက်ပြီးတော့ ဒီဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေကို ဆက်လက်ပြီးတော့ စောင့်ထိန်းလိုက်နာမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
ဦးသန်းလွင်ထွန်း။ ။ကျနော် ဒီနေရာမှာ နားလည်တဲ့အချက်က လွှတ်တော်တွင်း ပြင်ဆင်မှုတွေနဲ့ ပတ်သက်လို့ ၂၀၀၈ ခုနှစ် အခြေခံဥပဒေကို ပထမဦးဆုံး အကြိမ် လွှတ်တော်ခေါ်တဲ့အခါမှာ ၂၀၁၀ ရွေးကောက်ပွဲအပြီး ၂၀၁၁ ဖေဖော်ဝါရီလမှာ ပထမဆုံးအကြိမ် လွှတ်တော် ခေါ်တဲ့အချိန်မှာ လွှတ်တော်ရဲ့ ပထမဆုံးလုပ်ငန်းက ဒီ ၂၀၀၈ ခုနှစ် အခြေခံဥပဒေကို အတည်ပြုလိုက်တဲ့၊ အသက်ဝင်တယ်ဆိုတဲ့အချက် ရှိတယ်လေ။ ဒါပေမယ့် ဒီရှိပြီးသား ဥပဒေ တခုကို ပြင်ဆင်တဲ့ကိစ္စက ဘာကြောင့်မို့ အခုလက်ရှိ ဥပဒေပြုနေတဲ့ လွှတ်တော်အတွင်းမှာပဲ အသက်ဝင်လှုပ်ရှားမှု မဖြစ်နိုင်တာလဲ ဆိုတာလေးကို အဲဒါလေးကို ကျနော်သိပ်မရှင်းဘူး။ ဘာကြောင့်မို့လို့ နောက် လွှတ်တော်အထိ စောင့်ရမှာလဲ။
သူရဦးရွှေမန်း။ ။ ဟုတ်တယ်။ အကယ်လို့ ဒီကိစ္စက အခုလို မေးမှလည်း ပိုရှင်းလိမ့်မယ်။ တချို့လည်း လွယ်လွယ်နဲ့ မသိနိုင်ဘူး။ ဆိုကြပါစို့။ အကယ်လို့ ခုနက ၂၀၁၅ ဖွဲ့စည်းပုံ အခြေခံဥပဒေ ဆန္ဒခံယူပွဲ ပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာ ပြီးတာနဲ့ ချက်ချင်းကြီး ဒီဟာ အသက်ဝင် လှုပ်ရှားမယ်ဆိုရင် ဒီနေ့ မဏ္ဍိုင်ကြီး သုံးရပ် ဖွဲ့စည်းထားတာ ရှိတယ်။ ဥပဒေပြုရေး မဏ္ဍိုင်၊ အုပ်ချုပ်ရေး မဏ္ဍိုင်၊ တရားစီရင်ရေး မဏ္ဍိုင် ရှိတယ်။
အဲဒီမဏ္ဍိုင်ထဲမှာ ဆိုကြပါစို့။ ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေ ပြင်လိုက်တဲ့အခါမှာ ပြည်နယ်၊ တိုင်းဒေသကြီး ၀န်ကြီးချုပ်များသည် တိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်က ရွေးချယ်တဲ့ဟာကို သမ္မတကနေပြီးတော့ အတည်ပြုတယ် ဆိုရင် ခုန ပြုပြင်ပြောင်းလဲတာမှာ ဒါပါသွားရင် အဲဒီအတိုင်း လိုက်နာကျင့်သုံးရမယ် ဆိုရင် ဒီနေ့ တိုင်းဒေသကြီး ၀န်ကြီးချုပ်တွေဟာ ဒီနေ့ လူတွေ ဖြစ်မှာ မဟုတ်တော့ဘူး။
အဲဒီအတိုင်းပဲ၊ အစိုးရအဖွဲ့ထဲမှာလည်း ပြောင်းလဲလိုက်တဲ့အပေါ် မူတည်ပြီးတော့ ဆိုကြပါစို့ အကယ်လို့ ပြင်ဆင်ရေးမှာ အောင်မြင်သွားမယ်ဆိုရင် ၀န်ကြီးများသည် လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များ ဖြစ်ရမယ်ဆိုတဲ့ ပြောင်းလဲမှုပါသွားရင် ဒီနေ့ လက်ရှိ ရှိနေတဲ့ ၀န်ကြီးတွေဟာ တမျိုးတမည်တွေ ဖြစ်သွားနိုင်တယ်။ အဲဒီအတိုင်းပဲ၊ ဒီနေ့ လွှတ်တော်တွင်းမှာ ဆွေးနွေးနေကြတဲ့ တရားသူကြီးချုပ်များကိုလည်း လွှတ်တော်က ရွေးချယ် တာဝန်ပေးတဲ့ သူများ ဖြစ်ရမယ်ဆိုလို့ရှိရင် အကုန်လုံး ကမောက်ကမ ဖြစ်သွားနိုင်တယ်။ ဒါကြောင့်မို့လို့ ဒီဟာကို အသက်ဝင် လှုပ်ရှားမယ်ဆိုလို့ ရှိရင် မဏ္ဍိုင်ကြီး သုံးရပ် အတွင်းမှာ မလိုလားအပ်တဲ့ ပြဿနာတွေဖြစ်ပြီးတော့မှ တိုင်းပြည်အတွက် အန္တရာယ် ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။
ဦးသန်းလွင်ထွန်း။ ။သဘောကတော့ လွှတ်တော်တွင်း ပြင်ဆင်မှုတွေဟာ တခြားအုပ်ချုပ်ရေး မဏ္ဍိုင်ကိုပါ သွားပြီးတော့ သက်ရောက်မှုတွေ ရုတ်ချည်းဖြစ်လာနိုင်တဲ့ အနေအထားကို ကာကွယ်ဖို့အတွက် ဒါ နောက်ထပ် လွှတ်တော်အသစ်တက်လာတဲ့အချိန်ရောက်မှ အတည်ပြုပေးမယ်၊ နောက်ထပ် အစိုးရဖွဲ့စည်းနိုင်မယ့် အချိန်မျိုးမှာမှ အတည်ပြုပေးမယ်ဆိုတဲ့ သဘောမျိုးပေါ့။
သူရ ဦးရွှေမန်း။ ။အဓိက မဏ္ဍိုင်ကြီး သုံးရပ်ပေါ့။ မဏ္ဍိုင်တခုတည်းမဟုတ်ဘူး။ ဒီဥပဒေပြုရေး မဏ္ဍိုင်မှာလည်း အပြောင်းအလဲ ရှိနိုင်တယ်။ အဲဒီအတိုင်းပဲ နောက်တခါ အုပ်ချုပ်ရေး မဏ္ဍိုင်၊ တရားစီရင်ရေး မဏ္ဍိုင် ၊ မဏ္ဍိုင်ကြီး သုံးရပ်မှာ အပြောင်းအလဲ ဖြစ်သွားနိုင်တဲ့ အတွက် အဲဒီလိုသာ ပြောင်းလဲ သွားမယ်ဆိုရင် ဒီနေ့ နိုင်ငံရဲ့ ဖြစ်ပေါ်တိုးတက်မှု အခြေအနေတွေကို တမျိုး ထိခိုက်သွားနိုင်တယ်။
ဦးသန်းလွင်ထွန်း။ ။ဒီအချိန်မှာ လူထု အဓိက စိတ်ဝင်စားနေတဲ့ အချက်က ဒီ ၄၃၆ ကို ပြင်ပြီးပြီ ဆိုရင် အခုရှိနေတဲ့ ၂၀၀၈ ခုနှစ် အခြေခံ ဥပဒေကြီး ဟာ ပြုလွယ် ပြောင်းလွယ် ပြင်ဆင်လွယ်တဲ့ ဥပဒေတရပ် ဖြစ်လာပြီ။ အဲဒီအခါကျလို့ ရှိရင် နောက်ထပ် အရေးကြီးတဲ့ အချက်အလက်၊ ဥပဒေကြောင်း အရ ပြင်ဆင်မှုတွေမှာ အားလုံး စိတ်ဝင်စားနေတာက ၅၉(စ)၊ ၅၉ (စ) ဆိုလို့ ရှိရင် ဒါကို ပြင်ဆင်မှသာ နိုင်ငံတော် အကြီးအကဲ၊ နိုင်ငံတော် အကြီးအကဲ အလောင်းအလျာဖြစ်တဲ့ ဒုတိယသမ္မတတွေကို ရွေးကောက်ပေးရမယ့် အနေအထား။ အဲတော့ အခုလာမယ့် ၄၃၆ မှာ အခု ပြင်ဆင်နေတဲ့ အကြောင်းအရာတွေကို လာမယ့် လွှတ်တော် ပထမ သက်တမ်းကျတော့မှ စတဲ့ အခါကျတော့မှ အတည်ပြုပေးရမယ်ဆိုလို့ ရှိရင်၊ အဲဒီအချိန်မှာ ၅၉ (စ) ကို မပြင်ပေးနိုင်ဘူး ဆိုလို့ရှိရင် လူထု စိတ်ဝင်စားနေတဲ့ အထူးသဖြင့် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ပါဝင်နိုင်ခွင့် ဆိုတာက ဘယ်အချိန်မှာ ဖြစ် မှာလဲ။ အဲဒီတော့ ပထမလွှတ်တော်သက်တမ်းအတွင်းမှာ ဒီလို အစိုးရကို နာမည်စာရင်း မပေးခင် ကာလအတွင်းမှာ ၅၉(စ) ပြင်ဖို့ ဆိုတာ ဖြစ်နိုင်ပါ့မလား။
သူရ ဦးရွှေမန်း။ ။ အခု ဒီနေ့ လွှတ်တော်တွင်းမှာ ဆွေးနွေးနေတဲ့ ဖွဲ့စည်းပုံ အခြေခံဥပဒေ ပြောင်းလဲရေးနဲ့ ပတ်သက်လို့က ၄၃၆ တခုတည်းကို ဆောင်ယူတာ မဟုတ်ဘူး။ ခုနက ပြောတဲ့ ၅၉ (စ) စသဖြင့် ပုဒ်မတွေ အများကြီး ဆောင်ယူတာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကို ဒီတပတ် လွှတ်တော်မှာ ဥပဒေကြမ်း ပြုစုပြီးတော့ အဆုံးအဖြတ် ပေးတဲ့ နေရာမှာ ၄၃၆ လည်း ပါတယ်။ ၅၉ (စ) လည်း ပါတယ်။
ဦးသန်းလွင်ထွန်း။ ။ တပါတည်း ပါသွားတာပေါ့။
သူရ ဦးရွှေမန်း။ ။ တပါတည်း ပါတယ်။ အဲတော့ တချို့က ပြောနေကြတယ်။ ၄၃၆ တခုပဲ အာရုံစူးစိုက် ပြင်မယ်ဆိုတဲ့အခါမှာ ၄၃၆ ပြင်လို့ မရဘူးဆိုရင် ဘာလုပ်မလဲ။ ပြင်လို့ ရခြင်း မရခြင်းက လောလောဆယ် ဖြစ်ချင်တဲ့ဆန္ဒပဲ ရှိတယ်။ ဖြစ်လာမယ် မဖြစ်လာဘူးဆိုတာက လွှတ်တော်က ခုနက မဲပေး ဆုံးဖြတ်တဲ့ အခါကျမှ ပေါ်လာမှာ။ ဒါကြောင့်မို့လို့ ခုနက ပြင်ဆင်တဲ့နေရာမှာ ၄၃၆ တခုတည်း ဦးတည်ဆောင်ရွက်တယ်ဆိုပေမယ့် ကျန်တဲ့ အရေးကြီးတဲ့ ပြင်ဆင်သင့် ပြင်ဆင်ထိုက်တာတွေ ပြင်ဖို့ တပါတည်း ဆောင်ရွက်နေတယ်။
ဦးသန်းလွင်ထွန်း။ ။ ဒါပေမယ့် ကျနော် နားလည်ထားသလောက်ကတော့ ၄၃၆ က အင်မတန် အရေးကြီးပါတယ်။ ၄၃၆ ကြောင့်ပဲ လွှတ်တော်ရဲ့ ဥပဒေတွေဟာ ပြင်မလွယ် ဆင်မလွယ် ပြဿနာတွေ ဖြစ်နေရတာပါ။ အထူးသဖြင့် ၇၅ ရာခိုင်နှုန်း ကိစ္စ၊ နောက်ပြီးတော့ တဆင့်ပြီးတဆင့် တင်ရမယ့် ကိစ္စတွေဟာ မဖြစ်နိုင်သလောက် ဖြစ်နေတာကိုး။ အရေးကြီးတဲ့အချက်တွေ ပြင်ဆင်ရေးဟာ မဖြစ်နိုင်သလောက် ဖြစ်နေတယ်။ အထူးသဖြင့် ဥက္ကဋ္ဌကြီးလည်း ဟိုတနေ့က ပြောခဲ့ပါတယ်။ တပ်မတော်ရဲ့အမတ်ဦးရေဟာ - ၂၅ ရာခိုင်နှုန်းသော အမတ်ဦးရေရဲ့ ထောက်ခံမဲတမဲမှ မရခဲ့ဘူးဆိုလို့ရှိရင်၊ ၄၃၆ မပြင်ပဲ ၅၉ (စ) ပြင်ဖို့ လုပ်နေတယ်ဆိုလို့ ရှိရင်၊ တပါတည်း အကုန်လုံး ဆုံးရှုံးသွားမှာပဲ မဟုတ်တော့ဘူးလား။ ဘယ်လိုလုပ် ဒီဟာတွေဟာ ပြင်ဖို့ ဖြစ်လာနိုင်မှာလဲ။
သူရ ဦးရွှေမန်း။ ။ ၄၃၆ ကလည်း ၄၃၆ အပိုင်းပဲ။ ၅၉ (စ) ကလည်း ၅၉ အပိုင်းပဲ။ ၄၃၆ ကို အောင်မြင်အောင် ဆောင်ရွက်မယ်ဆိုလို့ ရှိရင်လည်း လွှတ်တော်တွင်းမှာရှိတဲ့ လွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ်များရဲ့ ၇၅ ရာခိုင်နှုန်း အပါ၊ ၅၉ (စ) လည်း ၇၅ ရာခိုင်နှုန်း အပါ၊ ဒါကြောင့်မို့လို့ တပါတည်းပဲ ဆောင်ရွက်ပါတယ်။ ဒါကြောင့်မို့ ၄၃၆ တခုတည်း ဆောင်ရွက်မယ်ဆိုရင် အဲဒါ တခုတည်း ပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာ အဲဒါပြီးဖို့ ဆိုရင်လည်း Referendum (လူထု ဆန္ဒခံယူပွဲ) လုပ်ရဦးမှာ။ ၄၃၆ ကို ပြောင်းချင်တယ်။ ပြောင်းချင်တယ်ဆိုလို့ ရှိရင် အောင်မြင်သွားပြီ။ အောင်မြင်သွားတဲ့အခါမှာ Referendum လုပ်ရဦးမှာ၊ Referendum လုပ်ပြီးသွားရင် Referendum က သတ်မှတ်ထားတဲ့ ဆန္ဒမဲရတော့မှ ၄၃၆ က အတည်ဖြစ်မှာ။ အဲဒီတော့ အဲဒီ လုပ်ငန်းစဉ်နဲ့ အတူတူ တပါတည်း ဆောင်ရွက်တာ ဖြစ်ပါတယ်။
အဲဒီမှာ ခုနက မေးခွန်းနဲ့ တဆက်တည်း ပြောပါမယ်။ လွှတ်တော်များ ပြန်လည် ဖွဲ့စည်းတဲ့အခါမှာ ၂၀၁၅ ရွေးကောက်ပွဲ ပြီးလို့ လွှတ်တော်များ ပြန်လည် ဖွဲ့စည်းတဲ့အခါမှာ လွှတ်တော်တွေ ပေါ်ပေါက်လာပြီ။ အဲဒီ လွှတ်တော်တွေ ပေါ်ပေါက် လာတဲ့အခါမှာ အကယ်လို့ ၅၉ (စ) ကို ပြင်နိုင်တယ် ဆိုရင် အဲဒီမှာ ပြင်ထားလိုက်တဲ့အတွက် လွှတ်တော် ဖွဲ့စည်းလိုက်တဲ့အပေါ်မှာ အစိုးရဖွဲ့စည်းလိုက်တယ်ဆိုလို့ ရှိရင် အကယ်၍ အဲဒီ ပုဂ္ဂိုလ်ဟာ ခုနပြောတဲ့ ၅၉ (စ) ပြင်ထားတာနဲ့ ညီညွတ်သွားတယ်ဆိုရင် အစိုးရအဖွဲ့မှာ ထိုက်သင့်တဲ့နေရာ- ပြောမယ်ဆိုရင် ဒုတိယ သမ္မတ၊ အဲဒီကတဆင့် သမ္မတ ဖြစ်နိုင်တဲ့ အခွင့်အလမ်းတွေ ရှိပါတယ်။
ဒါကြောင့်မို့ အခုလုပ်ဆောင်ချက်ဟာ ရည်မှန်းချက်ကို အတိအကျထားပြီးတဲ့ အခါမှာ အောင်မြင်မယ်ဆိုလို့ ရှိရင် ၄၃၆ တင် မကဘူး ကျန်တဲ့ ဥပဒေတွေကိုပါ တခါတည်း ပြင်ဆင်ပေးပြီးတော့ လာမယ့် ၂၀၁၅ ရွေးကောက်ပွဲ အပြီး ဖြစ်ပေါ်လာမယ့် လွှတ်တော်တွေက ဆက်စပ်ပြီးတော့ အစိုးရအဖွဲ့ ဖွဲ့စည်းတာ၊ တိုင်းဒေသကြီး အစိုးရဖွဲ့စည်းတာ၊ တိုင်းဒေသကြီး လွှတ်တော် ဖွဲ့စည်းတာ၊ တိုင်းဒေသကြီးမှာ ရှိတဲ့ တရားရေးမဏ္ဍိုင်တွေ ဖွဲ့စည်းတာ၊ ပြည်ထောင်စုမှာရှိနေတဲ့ တရားရေးမဏ္ဍိုင်နဲ့ အကျူံးဝင်အောင် လွှတ်တော်တွင်းမှာ ဆွေးနွေးနေပါတယ်။
ဦးသန်းလွင်ထွန်း။ ။ ဟုတ်ကဲ့။ ဒါကြောင့်မို့လို့ ဥက္ကဋ္ဌကြီးက ပြီးခဲ့တဲ့ရက်က တပ်မတော်ရဲ့အခန်းကဏ္ဍနဲ့ တပ်မတော်အပေါ် သြဇာရှိတဲ့ သမ္မတကြီးရဲ့ အခန်းကဏ္ဍ၊ ဒီလို ပြုပြင်ပြောင်းလဲရေးမှာ အရေးကြီးတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်း ထည့်သွင်းပြောဆိုသွားတာလို့ ကျနော် ယူဆပါတယ်။ အဲတော့ အဲဒီ အကြောင်းကိုမရှင်းခင်မှာ ကျနော် နည်းနည်းလေး ထပ်မေးချင်တာက ဒီအခု လက်ရှိ လွှတ်တော်ထဲမှာ ဆိုလို့ ရှိရင်လည်း ပြည်ခိုင်ဖြိုးပါတီရဲ့ အများစုပေါ့နော်။ ကျနော် မှတ်မိသလောက်ဆိုရင်တော့ ၅၄ ရာခိုင်နှုန်း ရှိမယ် ထင်ပါတယ်။ ၅၄ ရာခိုင်နှုန်းသော ပြည်ခိုင်ဖြိုးပါတီရဲ့ ကိုယ်စားလှယ်တွေကရော အခု အများစု အထူးသဖြင့် NLD ပါတီနဲ့ ဒီဘက်က ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်တို့ဘက်က တင်ပြနေတဲ့ ၄၃၆ ပြင်ဆင်ရေး အဆိုပြုချက်တွေ အပေါ်ကို ရာနှုန်းပြည့် ထောက်ခံမှုရော ရှိရဲ့လား။ ကျနော်တို့က ဟိုဘက်က ၂၅ ရာခိုင်နှုန်းကို မဲပြီး ပြောနေကြတယ်။ ဒီ ပြည်ခိုင်ဖြိုး ပါတီရဲ့ လွှတ်တော်အမတ်တွေထဲမှာ ၅၄ ရာခိုင်နှုန်းသော အမတ်တွေထဲမှာရော ရာနှုန်းပြည့် ထောက်ခံပေးမှာရော ရှိရဲ့လား။
သူရ ဦးရွှေမန်း။ ။ ဒီနေရာမှာ ပါတီရဲ့မူဝါဒနဲ့ပဲ ပြောရပါလိမ့်မယ်။ ပါတီရဲ့မူဝါဒက ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေပြောင်းလဲနိုင်ဖို့ စပြီးတော့ အဆိုပြုတယ်။ ပြီးတဲ့ အခါမှာ ဒီအဆိုကို ထောက်ခံတယ်။ ထောက်ခံတဲ့အတွက် ဒီနေ့ ဖွဲ့စည်းပုံ အခြေခံဥပဒေ ပြောင်းလဲဖို့အတွက် ကော်မတီတွေဖွဲ့၊ ပြီးတဲ့အခါမှာ ပြည်ထောင်စု လွှတ်တော်မှာ ဆွေးနွေး။ ပါတီအနေနဲ့ အဓိက ပြောမယ်ဆိုရင်တော့ ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေ ပြောင်းလဲဖို့လိုတယ်။ ၂၀၀၈ အခြေခံဥပဒေဟာ ဟိုခေတ် ဟိုအခါတုန်းက အမှန်ဆုံးလို့ ပြောနိုင်တယ်။ ဒါပေမယ့် ဒီခေတ် ဒီအခါ ကျတဲ့အခါကျတော့ ဒီခေတ် ဒီစနစ်နဲ့ လျော်ညီတဲ့ ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေ ဖြစ်ဖို့ လိုတယ်။ ဒါကြောင့်မို့ ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေ ပြောင်းရမယ်၊ ပြင်ရမယ်။ ဘယ်အပေါ်မှာ ပြင်ရမလဲ။ ဦးတည်ချက်က ၃ ချက်ထားတယ်။ နံပတ် ၁- ဖွဲ့စည်းပုံ အခြေခံ ဥပဒေ ပြုပြင်ပြောင်းလဲတဲ့အခါမှာ နိုင်ငံတော်တည်ငြိမ်ရေးနဲ့ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး ပိုကောင်းလာရမယ်။ ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေ ပြုပြင်ပြောင်းလဲတဲ့ အခါမှာ တိုင်းရင်းသား စည်းလုံးညီညွတ်ရေး၊ အမျိုးသား ပြန်လည်သင့်မြတ်ရေး၊ ငြိမ်းချမ်းရေး၊ တရားဥပဒေ စိုးမိုးရေး ပိုကောင်းလာရမယ်။
ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေ ပြုပြင်ပြောင်းလဲတဲ့အခါမှာ ဒီနေ့ ဒီမိုကရေစီ ပြုပြင်ပြောင်းလဲရေး အရှိန်အဟုန် ပိုမြင့်လာရမယ်။ အဲလို ဆောင်ရွက်တဲ့အခါမှာ တချို့ ထားသင့်တာ ထားဖို့လိုမယ်။ ပြင်သင့်တာ ပြင်ဖို့လိုမယ်။ ဒါကြောင့် ဆက်ပြောမယ်ဆိုရင် ၄၃၆ ပြင်ဖို့ကိစ္စကိုလည်း ပြည်ထောင်စုကြံ့ခိုင်ရေးနဲ့ ဖွံ့ဖြိုးရေး ပါတီက ဒီလို သဘောထား ရှိတယ်။ ကျန်တဲ့ ဥပဒေ ပြောင်းလဲသင့် ပြောင်းလဲထိုက်တဲ့ ဥပဒေတွေကိုလည်း ပြည်ထောင်စုကြံ့ခိုင်ရေးနဲ့ ဖွံ့ဖြိုးရေးပါတီက ပြောင်းလဲဖို့ စီမံဆောင်ရွက်နေတာတွေ ရှိတယ်။ နောက် မဲပေးတဲ့ကိစ္စ အပေါ်မှာ ပါတီရဲ့ မူဝါဒတွေ အပေါ်မှာ ပါတီဝင်များ လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များ လိုက်နာရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
ဦးသန်းလွင်ထွန်း။ ။ ဟုတ်ကဲ့ပါ။ အဲ့တော့ ဖွဲ့စည်းပုံ အခြေခံဥပဒေကိစ္စတွေ ကနေပြီးတော့ တခြားအရေးကြီးတဲ့ကိစ္စလေးတခုကို ကျနော်ေ ပြာင်းချင်ပါတယ်။ ဥက္ကဋ္ဌကြီးလည်း စောစောကပြောပါတယ်။ ငြိမ်းချမ်းရေး ကိစ္စ၊ ငြိမ်းချမ်းရေး ကိစ္စက ပြည်တွင်းမှာတင်မကဘဲ ပြည်ပ နိုင်ငံတကာကပါ အထူးတလည် စောင့်ကြည့်နေရတဲ့ ကိစ္စ အပစ်အခတ်ရပ်စဲရေး ကိစ္စတွေပေါ့နော်။ဒီအပစ်အခတ်ရပ်စဲရေး ကိစ္စတွေမှာ ပြီးခဲ့တဲ့လက လွှတ်တော်တွေမှာ နိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာ အပစ်အခတ်ရပ်စဲရေး သဘောတူညီချက် စာချုပ် မဖြစ်မနေ ထိုးကြဖို့ကိစ္စ နည်းနည်းလေး တုံ့နှေးနေကြတဲ့ကိစ္စနဲ့ ပတ်သက်ပြီးတော့ ကြေညာချက်ထုတ်ပြီး တိုက်တွန်းထားတာ တွေ့ရတယ်။ ဒါပေမဲ့ နိုဝင်ဘာလ ၁၉ရက်နေ့က ဖြစ်ခဲ့တဲ့ ကချင်ပြည်မှာ ဖြစ်တဲ့ တိုက်ပွဲသတင်းတွေပေါ့နော်။ အထူးသဖြင့် တပ်မတော်ကနေပစ်ခတ်မှုကြောင့် ကချင် အရာရှိငယ်တွေ၊ အရာရှိလောင်းတွေ သေဆုံးရတဲ့ကိစ္စ ဒီလို ပစ်ခတ်မှုတွေမှာ နှစ်ဖက် တိုက်ခိုက်မှုပေါ့နော် ဟိုဘက်က ပစ်တာလည်း ရှိမယ်။ ဒီဘက်က ပစ်တာလည်းရှိမယ်ဆိုပေမဲ့ ဒါတွေက ငြိမ်းချမ်းရေးအတွက် အင်မတန်ကို ဝမ်းနည်းစရာကောင်းတဲ့ ကိစ္စတွေပါ။
ဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ လွှတ်တော်မှာတော့ ဒီကိစ္စမျိုးကို အရေးတကြီး အဆို တင်သွင်းပြီးတော့ တိုက်တွန်းမှုတွေ နှစ်ဖက် အစိုးရ၊ တပ်မတော်၊ တဖက်က တိုင်းရင်းသားအဖွဲ့အစည်းတွေ ထိန်းထိန်းသိမ်းသိမ်း လုပ်ဆောင်ဖို့ အကြောင်းတွေ ဆွေးနွေးတာပြောဆိုတာ လွှတ်တော်ရဲ့သဘောထား ရယူတာတွေ ကျနော် မတွေ့ရဘူး ခင်ဗျ။ အဲ့တော့ အဲ့တာနဲ့တဆက်တည်းပဲ ဥက္ကဋ္ဌကြီးရဲ့လမ်းညွှန်မှုနဲ့ ဒီဘက် လွှတ်တော်ထဲမှာ အပစ်အခတ် ရပ်စဲရေး ကိစ္စတွေကို ဘယ်လိုများ ဆောင်ရွက်နေသလဲဆိုတာလေးကို ကျနော် သိပါရစေ။
သူရဦးရွှေမန်း။ ။ သိတဲ့အတိုင်းပဲလေ။ လွှတ်တော်ထဲမှာ ဆွေးနွေးနေတာက ငြိမ်းချမ်းရေး ပါတယ်။ တခြား တိုင်းပြည်တိုးတက်ရေး ဒီမိုကရေစီရေး လူ့အခွင့်အရေးကိစ္စတွေပါ ဆွေးနွေးနေတဲ့အတွက် ခုနကိစ္စများ အကယ်လို့ပေ့ါလေ လွှတ်တော်ကိုလည်း တင်ပြလာမယ်ဆိုလို့ရှိရင် စဉ်းစားပေးရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ လွှတ်တော်ထဲမှာ အဆို ဆိုတဲ့အခါမှာလည်း လွှတ်တော်ကိုလည်း တဦးကနေပြီးတော့ အနည်းဆုံးတင်ပြပြီးတော့ သက်ဆိုင်သူတွေ ထောက်ခံမှ ဒီအဆိုကို ဆက်ဆွေးနွေးရမှာပါ။ ဒီဟာကတော့ ဒီလိုကိစ္စမျိုးတွေမှာ မကြာမကြာဖြစ်တဲ့အတွက် မကြာမကြာ လွှတ်တော်က တိုက်တွန်းဆောင်ရွက်နေပေမဲ့ ဆက်ဖြစ်နေတယ်။ လွှတ်တော်လည်း စိတ်မကောင်းပါဘူး။ ပုဂ္ဂိုလ်ရေးအရလည်း စိတ်မကောင်းပါဘူး။
သို့သော်လည်း ဒီလိုဖြစ်တဲ့ကိစ္စတွေက သူ့အကြောင်းနဲ့သူ ရှိပါတယ်။ ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ် လွှတ်တော်အနေနဲ့ ဒီလိုပစ်ခတ် တိုက်ခိုက်မှုတွေ ပစ်ခတ် တိုက်ခိုက်မှုတွေကြောင့် နှစ်ဖက် ထိခိုက်ကျဆုံးမှုတွေ ဒေသမှာ ရှိတဲ့ပြည်သူတွေ အတွက် လုံးဝကို မလိုလားအပ်တာ အမှန်ပဲ။ ဒါကြောင့်လည်း မိမိတို့ လွှတ်တော် အနေနဲ့ ဥပဒေပြုရေး၊ အချင်းချင်း ပြန်လှန်ထိန်းကျောင်းရေးဆိုတဲ့ အဓိက တာဝန်အပြင် ဒီကနေ့ လွှတ်တော်မှာ ဦးစားပေးဆောင်ရွက်နေတာ ခုနက ပြောတဲ့ အချက်တွေ တိုင်းရင်းသားစည်းလုံးညီညွှတ်ရေး၊ အမျိုးသားပြန်လည်သင့်မြတ်ရေး၊ ပြီးတဲ့အခါမှာ ငြိမ်းချမ်းရေး တရားဥပဒေစိုးမိုးရေးကို အလေးထားပြီး လွှတ်တော်က ဆောင်ရွက်လျက် ရှိပါတယ်။
ဦးသန်းလွင်ထွန်း။ ။ ဥက္ကဋ္ဌကြီးအနေနဲ့က အခုလွှတ်တော်မှာ ဥက္ကဋ္ဌနဲ့ နာယကကြီး အပြင်ကို အရင်ကလည်း စစ်ဖက်ဆိုင်ရာမှာ အဆင့်အမြင့်ဆုံး ရာထူးယူခဲ့တဲ့ ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်နေတော့ ငြိမ်းချမ်းရေး ကိစ္စတွေမှာ အပစ်အခတ်ရပ်စဲရေးကိစ္စတွေမှာ ဥက္ကဋ္ဌကြီးရဲ့ သဘောထား ဘယ်လိုရှိပါသလဲ။ ဘာကြောင့်များ ဒီလိုတုံ့နှေးမှုတွေ ဘာကြောင့်များ ဒီလိုမပြေလည်မှုလေးတွေ ရှိနေတာလည်း ဆိုတာအပြင်ကို တကယ်လို့များ ဥက္ကဋ္ဌကြီးအနေနဲ့ ဒီအခြေအနေတွေကို ထဲထဲဝင်ဝင်ဦးဆောင်ရမယ့် အနေအထား ရောက်လာပြီ ဆိုလို့ရှိရင် ဘယ်လိုပုံစံမျိုးနဲ့ ချဉ်းကပ်ချင်သလဲ သိချင်ပါတယ်။
သူရဦးရွှေမန်း။ ။ အသေးစိတ်တော့ မပြော-နိုင်ဘူး ပေါ့လေ။ ခုနက ဒါနဲ့ပတ်သက်လို့ အရင်လည်း အတွေ့အကြုံရှိခဲ့တဲ့အတွက် တချို့ကိစ္စတွေမှာ ဒီ့ထက်တော့ ပိုပြီး စွမ်းဆောင်နိုင်မယ်လို့ထင်တယ်။ ဒါ ကိုယ့်အထင်ပေါ့။ သို့သော်လည်း အဖြေရှိပေမဲ့လို့ တကယ်လက်တွေ့ကျတဲ့အခါကျတော့ လုပ်ဆောင်ချက်ကပဲ အဖြေပေးမှာပါ။ ဒါပေမဲ့ စိတ်ထဲမှာတော့ ရှိပါတယ်။ သို့ရာတွင် စိတ်ထဲရှိပေမဲ့လို့ ခုနက ပြောသလိုပေါ့ လုပ်နိုင်ခွင့်နဲ့ လုပ်ကိုင်နိုင်တဲ့ အခြေအနေအပေါ်မှာ မူတည်ပြီးတော့ အောင်မြင်မှုအခြေအနေကတော့ လုပ်ပြီးမှ ပြောလို့ရတဲ့ အနေအထားရှိပါတယ်။
ဦးသန်းလွင်ထွန်း။ ။ ဟုတ်ကဲ့။ အဲ့တော့ စောစောကမေးခွန်းကိုပဲ ပြန်ထပ်ဆက်ရမယ့် ဆိုရင်တော့ ဘာလဲဆိုတော့ ဒီမေးခွန်းမေးတဲ့အတွက် တချို့လည်း စိတ်အနှောင့်အယှက် ဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ အခု ကချင်ကိစ္စမှာ အခုနောက်ဆုံးဖြစ်ခဲ့တဲ့ အဖြစ်အပျက်မှာဆိုလို့ရှိရင် လွှတ်တော်ထဲမှာ ဥက္ကဋ္ဌကြီးပြောသလို အဆိုတင်သွင်းလာသူရှိလာမယ်ဆိုရင် စဉ်းစားဆုံးဖြတ်ပြီးတော့ အဆိုပြုချက်တင်တာရှိနိုင်တယ် ဒါမှမဟုတ် အကြံပြုချက်တွေ ကြေညာချက်တွေ ထုတ်လာနိုင်တာတွေ ရှိတယ်။ ဒါပေမဲ့လည်း တင်တဲ့သူမရှိဘူး။ ဒါ တခြားအကြောင်းတွေနဲ့ အလုပ်များနေတာလည်း ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ ပြီးခဲ့တဲ့ ရက်ပိုင်းအတွင်းမှာတော့ လွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ်တစ်ဦးဖြစ်တဲ့ ဦးအောင်သောင်းကိစ္စမှာဆိုရင် ဒါ အမေရိကန်ကနေပြီးတော့ Blacklist အမည်မည်းစာရင်းသွင်းပြီးတော့ ဒဏ်ခတ်လိုက်တဲ့ကိစ္စမှာ ဒါကို လွှတ်တော်မှာ အရေးတကြီး အဆိုတင်သွင်းပြီးတော့ တထိုင်တည်းမှာပဲ အားလုံး ကန့်ကွက်လိုက်ကြတယ်ဆိုတဲ့ကိစ္စမျိုးကျတော့ ဟို ကျနော်တို့ အပြင်အမြင်အရ ပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင် ဒီလိုအမည်မည်းစာရင်း သွင်းခံထားရတဲ့သူတွေ ဆိုတာက လွှတ်တော်ထဲမှာပဲ ရှိနေတာပဲ။ နဂိုကတည်းကလည်း ရှိနေတယ်။ အလားတူပဲ အစိုးရအဖွဲ့တွေမှာလည်း ရှိနေကြတာပဲ။
ဒါပေမဲ့ ဦးအောင်သောင်းကို အခုလို လွှတ်တော်သက်တမ်းကာလမှာ အမည်မည်းစာရင်း အမည်တင်သွင်းခံရတယ်ဆိုပြီး လွှတ်တော်ကနေ အရေးတကြီး အဆိုတင်သွင်းပြီးတော့ ကန့်ကွက်လိုက်ကြတယ်ဆိုတော့ တကယ်တမ်းဖြစ်သင့်တာက ဘာကြောင့် ဒီလို ဗမာပြည်ရဲ့ပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုတွေ ဖြစ်နေတဲ့ အချိန်မှာ တဖက်ဖက်ရဲ့ နားလည် လွဲမှားမှုပဲ ဖြစ်မလား၊ ဒါမှမဟုတ် အမှန်တကယ် အချက်အလက်တွေ ပါသလားဆိုတာ လွှတ်တော်အနေနဲ့ စုံစမ်း ကြားနာမှု စုံစမ်းစစ်ဆေးမှု တခုခု မလုပ်သင့်ဘူးလား။ ဒါက်ို တခဲနက် ကန့်ကွက်လိုက်ကြတယ်ဆိုတာထက် ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ ဥက္ကဋ္ဌကြီးက ဒီကိစ္စတွေမှာ အခုလွှတ်တော်ထဲမှာ ဦးစီးပြီးတော့ ဆောင်ရွက်ပေးနေတဲ့သူမို့လို့ ကျနော်မေးတာပါ။
သူရဦးရွှေမန်း။ ။ မှန်ပါတယ်။ ဒီကိစ္စဟာ အချုပ်အခြာအာဏာပိုင်တဲ့ မြန်မာနိုင်ငံ။ အဲ့ မြန်မာနိုင်ငံထဲကမှ လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်။ လွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ်ထဲကမှ ကော်မတီဥက္ကဋ္ဌ။ အဲ့ သူ့ကို ဒီလိုဆောင်ရွက်လိုက်တဲ့ကိစ္စမှာ ဘာကြောင်းတွေဆိုတာ လွှတ်တော်က စုံစမ်းစရာအကြောင်းမရှိဘူး။ ဒါ လွှတ်တော်ရဲ့လုပ်ငန်းလည်း မဟုတ်ဘူး။ သို့သော် မြန်မာနိုင်ငံသားတစ်ယောက် လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် လွှတ်တော်ကော်မတီဥက္ကဋ္ဌ တစ်ယောက် အမေရိကန်နိုင်ငံက ဒီလို၊ အမေရိကန်နိုင်ငံ သက်ဆိုင်ရာ အဖွဲ့အစည်းက ဒီလိုလုပ်လိုက်တဲ့အခါမှာ အချုပ်အခြာအာဏာနဲ့ လွှတ်တော်ကို တနည်းမဟုတ် တနည်း ထိခိုက်နိုင်တယ်လို့ ယူဆတယ်။ အဲ့လိုယူဆတဲ့အတွက် အဲ့လိုဟာကို လွှတ်တော်က ကန့်ကွက်တယ်။ အဲ့လိုပဲ ဒီလိုဖြစ်အောင် သတင်း ပေးသူကိုလည်း ရှုတ်ချတယ်။
ဒါသည် လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တစ်ဦးရဲ့ အခွင့်အရေး၊ မြန်မာနိုင်ငံသား တစ်ယောက်ရဲ့အခွင့်အရေးကို မြန်မာနိုင်ငံမှာရှိတဲ့ လွှတ်တော်က ဆောင်ရွက်ခြင်း ပဲဖြစ်ပါတယ်။ အဲ့သလိုဆောင်ရွက်တဲ့ အခါမှာ မြန်မာနိုင်ငံနဲ့ အမေရိကန်နိုင်ငံရဲ့ ဆက်ဆံရေးဟာ ကောင်းလာမယ့် အခြေအနေမျိုးမှာ ဒီလိုလုပ်လိုက်တဲ့အတွက် အမေရိကန်နဲ့ မြန်မာနိုင်ငံ ဆက်ဆံရေးထိခိုက်မှာလည်း စိုးရိမ်တယ်။ ဒါကြောင့်မို့လို့ ကန့်ကွက်တယ် ရှုတ်ချတယ်ဆိုတဲ့နေရာမှာ အမေရိကန်-မြန်မာ နှစ်နိုင်ငံ ဆက်ဆံရေးကို ထိခိုက်မှာစိုးတယ်ဆိုတာလည်း ဖတ်ကြည့်ရင် တွေ့ပါလိမ့်မယ်။ ဒါကြောင့်မို့လို့ အဲ့လိုပဲ ထိထိရောက်ရောက် တန်ပြန်ဆောင်ရွက်တယ်လို့ လည်း ပြောလို့ရပါတယ်။ အမှန်ကတော့ မြန်မာနိုင်ငံ အချုပ်အခြာ အာဏာကို မိမိတို့ မြန်မာနိုင်ငံသားတွေက အချုပ် အခြာအာဏာကို စောင့်ထိန်းပေးဖို့ လွှတ်တော်က ဆောင်ရွက်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။
ဦးအောင်သောင်း ဆိုတာနဲ့ မဟုတ်ပါဘူး။ မည်သည့်လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်မဆို မည်သည့်နိုင်ငံသားမဆို ဒါကြောင့် မိမိရဲ့ အချုပ်အခြာ အာဏာပိုင်အတွင်းမှာ ဒီလိုဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ကိစ္စကိုတော့ မိမိတို့အနေနဲ့ ဘယ်တုန်းကမှ လက်ခံခဲ့တာမရှိပါဘူး။
ဦးသန်းလွင်ထွန်း။ ။ အဲ့တော့ ဒီပုံစံဆိုလို့ရှိရင် လွှတ်တော်ထဲမှာပဲ ရှိတဲ့ တခြား လွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ်တွေရှိပါသေးတယ်။ အမည်တွေတော့ ကျနော်လည်း အတိအကျ မမှတ်မိဘူးပေါ့။ ခေါင်းထဲ ချက်ခြင်း ထွက်လာတာဆိုလို့ရှိရင်တော့ ဦးခင်ရွှေတို့လိုရှိလိမ့်မယ်လေ။ သူတို့ဆိုလို့ရှိရင် အမည်မည်းစာရင်း တင်သွင်းခံထားရတာပဲ။
သူရဦးရွှေမန်း။ ။ ဘယ်သူလဲ။ ဘယ်သူလဲ။
ဦးသန်းလွင်ထွန်း။ ။ ဦးခင်ရွှေတို့။
သူရဦးရွှေမန်း။ ။ ဟုတ်ပြီ။
ဦးသန်းလွင်ထွန်း။ ။ အမည်မည်းစာရင်း တင်သွင်းခံထားရတဲ့သူတွေကို ဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့ လွှတ်တော်ထဲနေပြီးတော့ ဒီကိစ္စတွေကို နောက်ဆက်တွဲ ကြားရမယ့် ပုံစံမျိုး ရှိနေတာပေါ့။
သူရဦးရွှေမန်း။ ။ မဆိုင်ပါဘူး။ အခုဟာကျတော့ သူတို့ရှိရင်ရှိနေမယ်။ ဦးအောင်သောင်းဆိုတဲ့ သူတယောက်ကိုပဲ ကန့်ကွက်တယ်။ ပြီးတဲ့အခါမှာ ထုတ်ပြန်ကြေညာလိုက်တယ်။ ထုတ်ပြန်ကြေညာတဲ့အခါမှာ ထုတ်ပြန်ကြေညာချက်ကို ကြည့်မယ် ဆိုလို့ရှိရင် တော်တော်လေး ဆိုးဝါးပါတယ် နော်။ ဦးအောင်သောင်းကို ထိခိုက်တာထက် အဖွဲ့အစည်းကိုလည်း ထိခိုက်တယ်။ ပြီးတဲ့အခါမှာ လွှတ်တော်လည်း ထိခိုက်တယ်။ အဲ့ဒီ့ဟာသည် ထုတ်ပြန်ကြေညာချက်လေး သပ်သပ်မဟုတ်ဘဲနဲ့ အဲဒီကနေ အကြောင်းကြားစာအရ အခုလိုဆိုးဆိုးဝါးဝါးဖြစ်သွားတဲ့ သဘောရှိပါတယ်။
ဦးသန်းလွင်ထွန်း။ ။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ အဲဒီတော့ ဥက္ကဋ္ဌကြီးရဲ့ အခုလက်ရှိ လုပ်ငန်းတွေအပြင်ပေါ့နော် လာမယ့် ရွေးကောက်ပွဲတွေလည်း နီးလာပါပြီ။ ရွေးကောက်ပွဲတွေမှာ ဥက္ကဋ္ဌကြီးအနေနဲ့ ပြည်ခိုင်ဖြိုးပါတီကိုပြန်လည် ဦးဆောင်ပြီးတော့ ရွေးကောက်ပွဲတွေ အပြီးမှာ ပြန်လည် ဦးဆောင်ရမှာပါပဲ။ အဲဒီအခါကျလို့ ရှိရင် ဥက္ကဋ္ဌကြီး နဂိုပြောကြားထားချက်အတိုင်းပါပဲ ရည်မှန်းချက် အနေနဲ့ နိုင်ငံတော် အကြီးအကဲ၊ သမ္မတအနေနဲ့ ရည်မှန်းချက် အနေနဲ့လည်း ဥက္ကဋ္ဌကြီး နေနဲ့ ပြေကြားထားပြီးသားပါ။ …ဆိုတော့ အဲဒီကိစ္စတွေမှာဆိုရင် တဖက်မှာဆိုရင်လည်း အနီးစပ်ဆုံး ပြောရမယ် ဆိုလို့ရှိရင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် တို့လို ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးတွေကလည်း နိုင်ငံတော် အကြီးအကဲ အဖြစ်မျိုးကို လိုချင်ပါတယ်။ လုပ်ဆောင်လိုတာမျိုးတွေကို ပြောကြားထားတွေရှိနေတော့ အခုလက်ရှိအချိန် ဖွဲ့စည်းပုံအရ ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင် ဒုတိယသမ္မတတွေအဖြစ်ကို အရင်ဆုံး အမည်တင်သွင်းခံရဖို့ လုပ်ကြရမှာပေါ့။လုပ်ကြရဖို့ဆိုရင် တပ်မတော်က တယောက် ရှိမယ်၊ တိုင်းရင်းသားတွေထဲက တယောက်ရှိမယ် ဆိုလို့ ရှိရင် ဥက္ကဋ္ဌကြီးနဲ့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်တို့က နောက်ထပ် ကျန်နေတဲ့တနေရာ ဒုတိယသမ္မတနာမည် တင်သွင်းခံရဖို့အရေးကို အပြိုင်အဆိုင်၊ တကယ်လို့ ပုဒ်မ ၅၉ (စ) ကို ပြင်ခဲ့တယ်ဆိုရင်ပေါ့ အပြိုင်အဆိုင် ကြိုးပမ်းကြရမယ့်ပုံ ရှိပါတယ်။ အဲဒီအတွက် ဥက္ကဋ္ဌကြီး နေနဲ့ ဘယ်လို သဘောရှိပါသလဲခင်ဗျ။
သူရ ဦးရွှေမန်း။ ။ ဘယ်လို သဘောရှိသလဲဆိုရင် ပြိုင်ဆိုင်ဖို့အတွက် ကတော့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်လည်း ပြိုင်ဆိုင်မယ်။ ကျန်တဲ့ တခြားသူ ရှိမယ်ဆိုရင်လည်း ပြိုင်ဆိုင်မယ်။ ဒါက အခွင့်အရေးပါပဲ။ ပြိုင်ဆိုင်မှုအတွက် မိမိတို့ လိုလားတယ်။ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် နဲ့ ပြောမယ် ဆိုရင်လည်း အခု ပါတီချင်းပြိုင်ဆိုင်နေတာပဲ။ လူချင်းလည်း ပြိုင်ဆိုင်နေတယ်။ အဲဒီလို ပြိုင်ဆိုင်ဖို့အတွက် ဒီလို ရှိတဲ့နေရာမှာ တယောက်နဲ့တယောက် ရန်သူလို သဘောထား ဆောင်ရွက်မယ့်အချိန်လည်း မဟုတ်ဘူး။ ဟိုတုန်းကလို ပါတီချင်းအနေနဲ့လည်း အပြုတ်တိုက်ဖို့ အပြတ်ရှင်းတဲ့အချိန်လည်း မဟုတ်ဘူး။ ဒီဟာသည် ခေတ်စနစ်နဲ့ ပေါ်ပေါက်လာတဲ့ကိစ္စ ဖြစ်တယ်။ ပြိုင်ဆိုင်မှုအတွက် လိုလားတယ်။ မည်သူမဆို ၀င်ရောက်ယှဉ်ပြိုင်နိုင်တယ်။ ဒီကနေ့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် နဲ့ ခင်ခင်မင်မင်နေပြီးတော့ ဆောင်ရွက် တဲ့ နေရာမယ် နိုင်ငံနဲ့ နိုင်ငံသား အကျိုးစီးပွား အတွက်ဆိုရင် အားလုံး ပူးပေါင်း ဆောင်ရွက်မယ်။ သို့သော် ရွေးကောက်ပွဲဆိုရင် ပြိုင်မယ်။ အနိုင်ရအောင်။ အဲဒီအတိုင်းပဲ ရွေးကောက်ပွဲနောက်ပိုင်း ဖြစ်လာမယ့်ကိစ္စလည်း ပြိုင်မယ်။ ကောင်းသော ယှဉ်ပြိုင်ခြင်း၊ တရားသော ယှဉ်ပြိုင်ခြင်း အတွက် နှစ်ယောက်လုံးက သဘောတူပါတယ်။
အာမခံကြေး၁ ဦးကို ဘတ်ငွေ ၅ သိန်း
ခိုတောင်ကျွန်းလူသတ်မှုနဲ့ စွပ်စွဲဖမ်းဆီးချုပ်နှောင်ခံထားရတဲ့ မြန်မာလူငယ် ၂ ဦး အာမခံရရှိရေးအတွက် ဘန်ကောက်မြန်မာသံရုံးက ငွေကြေးစိုက်ထုတ် လုပ်ဆောင်ပေးသွားမယ်လို့ အမှုကိစ္စ လိုက်ပါလုပ်ဆောင်ပေးနေတဲ့ ရှေ့နေ ဦးအောင်မျိုးသန့်က ပြောပါတယ်။
“ဒီနေ့မနက်ပိုင်းကပဲ သံအမတ်ကြီးနဲ့ ကျနော်တို့တွေ့ဆုံပြီး အစည်းအဝေး လုပ်ကြပါတယ်။ အစည်းအဝေးဆုံးဖြတ်ချက်ကတော့ အာမခံယူဖို့ပါ။ သံအမတ်ကြီးက အာမခံယူဖို့ ငွေရေးကြေးရေး ကိစ္စလည်း သူဆောင်ရွက်ပေး မယ်လို့ ပြောပါတယ်။ နိုင် ငံတော်အစိုးရအစီအစဉ်နဲ့ အာမခံတင်မယ်ဆိုတဲ့ သဘောပေါ့။ ဥပဒေရေးရာအရတော့ ထိုင်းရှေ့နေများကောင်စီက စာတင်ရမှာပါ။ ကလေးတွေ ထွက်မပြေးကြောင်းတို့၊ အမှုချိန်း မှန်မှန်လာဖို့ ဆိုတာတို့ သူတို့ ရေးမှာပါ။”
လူငယ် ၂ ဦးကို အာမခံနဲ့ထုတ်ဖို့ ဒီအပတ်ထဲ လုပ်ဆောင်သွားမယ်လို့လည်း ပြောပါတယ်။
အာမခံကြေးပေးဖို့ကိစ္စ၊ တရားရုံးတင်မယ့်ကိစ္စ၊ မြန်မာလူငယ် ၂ ဦးကို အကျဉ်းထောင်က ထုတ်ဖို့ကိစ္စတွေကိုတော့ မြန်မာသံရုံးကဖွဲ့ထားတဲ့ အထူးအဖွဲ့က လုပ်ဆောင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။
မြန်မာလူငယ် ၂ ဦး အာမခံလျှောက်ခွင့်ကို ပြီးခဲ့တဲ့ နိုဝင်ဘာ ၂၀ ရက်နေ့က ခွင့်ပြုပေးလိုက်တာ ဖြစ်ပါတယ်။ ၁ ဦးကို ဘတ်ငွေ ၅ သိန်း ပေးဆောင်ပြီး အကျဉ်းထောင်ကနေ အာမခံနဲ့ ထုတ်ယူရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
ပြီးခဲ့တဲ့ စက်တင်ဘာ ၁၅ ရက်နေ့က ခိုတောင်ကျွန်း (လိပ်ကျွန်း) မှာ ဗြိတိန်နိုင်ငံသား ၂ ဦး အသတ်ခံရတဲ့ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီး မြန်မာလူငယ် ကိုဇော်လင်း နဲ့ ကိုဝင်းဇော်ထွန်းတို့ နှစ်ဦး စွပ်စွဲဖမ်းဆီးခံထားရတာပါ။
၁။ ယနေ့ည နေ (၆) နာရီတွင် အမျိူးသားလွတ်တော်ဥက္ကဌ
ဦးခင်အောင်မြင့် ဦးဆောင်သည့် မြန်မာကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့နှင့်
မြန်မာသံရုံးမှ အထူးဖွဲ့စည်းထားသည့် ကော့တောင် ၊
အထူးစုံစမ်းရေး ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့တို့ ဘန်ကောက်မြို့တွင်၊
၂။ အထူးစုံစမ်းရေးကော်မီတီမှ မိမိတို့ဆောင်ရွက်ပြီးစီးခဲ့သည့်
ရှေ့ဆက်လုပ်ဆောင်မည်၊ လုပ်ငန်းစဉ်များကို ဆွေးနွေးခဲ့သည်။
ထိုင်းနိုင်ငံဝန်ကြီးချုပ်အပါအဝင်၊ ထိုင်းလွတ်တော်အဖွဲ့ဝင်များနဲ့ 
ကော့တောင်ကျွန်းလူသတ်မှု့တွင် မတရားဖမ်းဆီးခံထားရသည့် မြန်မာအလုပ်သမား နှစ်ယောက် ကိစ္စကို ဆွေးနွေးမည်ဖြစ်သည်။
ထို့အပြင် ကော့ စမွေအကျဉ်းထောင်တွင် ဖမ်းဆီးခံထားရသည့် မောင်ဇော်လင်းနှင့်ဝင်းဇော်ထွန်းတို့ကိုလဲ
၅။ အမျိူးသားလွတ်တော်ဥက္ကဌ ဦးခင်မောင်မြင့် မှ
ရခိုင်းအမျိူးသားလူမှု့ကယ်ဆယ်ရေးအဖွဲ့ သို့ ပေးအပ်လှူဒါန်းခဲ့သည့်
မြန်မာငွေ ကျပ် (သိန်းသုံးရာ) ထဲမှ အထူးစုံးစမ်ရေး ကော်မီတီ၏
အမေရိကန်ဒေါ်လာ ( ၁၅၀၀၀) ( ဒေါ်လာတစ်သောင်းခွဲတိတိ) အား ပေးအပ်လှူဒါန်းခဲ့သည်။
ကျန်ရှိနေသေးသည့် ငွေကြေးများကိုလဲ အထူးစုံးစမ်းရေးကော်မီတီသို့ လွဲပြောင်းပေးရန်၊အမျိူးသားလွတ်တော်ဥက္ကဌမှ ညွန်ကြားခဲ့သည်။
BY YeYint Nge ... 11/23/20140comment
ပဲခူးမြို.တွင် တရားမ၀င်တည်းခိုဝင်ရောက်နေသူ တရုပ်လူမျိုး(၁)ဦး တွေ.ရှိ
သတင်းဓါတ်ပုံ - Thant Zin.
BY YeYint Nge ... 11/22/20140comment
VIDEO: 'Friendly' Prayut pats journalist's head
A video of Prime Minister Prayut Chan-o-cha pattingajournalist's head and rubbing his ear while giving an interview in Khon Kaen on Wednesday has sparked widespread criticism on social media. The video was uploaded on the Facebook page of Bangkok Post military affairs reporter Wassana Nanuam.
In Thai culture, it is highly inappropriate and bad manners to pat or touch anyone's head, which is considered the most honourable part of the body.
Netizens wrote that it was ill-mannered for Gen Prayut to play with the journalist's head as he was holdingamicrophone and kneeling. It was also strange that it was done in public and no one told him to stop.
Deputy government spokesman Sansern Kaewkamnerd said the premier "had no bad intentions and was only being playful withamember of the media".
တာမွေ ကြံ့ခိုင်ရေးက စည်းမှူး ရဲခေါင် (ခ) ကြူလွင် မှ ရဲများနှင့်ပေါင်းပြီးအပြစ်မဲ့ ပြည်သူကို ရိုက်သတ်
"WAR" ဖြူဖြူ +Lလွန်းဝါ
Phyu Phyu Kyaw Thein and L Lun Wah on World Stage
Myanmar Famous Singers, Phyu Phyu Kyaw Thein and L Lun Wah performed the song named "WAR" at UN International Day of Peace in Amsterdam.
Meaningful Song and Good performance! And do you think it's the time to sing this song?
BY YeYint Nge ... 11/21/20140comment
မန်း မ.ဘ.သ အရေးပေါ်အစည်းဝေး
အထက်မြန်မာပြည် မ.ဘ.သ အဖွဲ့အရေးပေါ်အစည်းအဝေးကို
ယနေ့ညနေ ၅နာရီအချိန်က မန်း မ.ဘ.သ ရုံးစိုက်ရာ
အမရပူရ မ.ဘ.သ ၊ ရေနံချောင်း မ.ဘ.သ
တောင်သာ မ.ဘ.သ၊ မိထ္ထီလာ မ.ဘ.သ
လားရှိုး မ.ဘ.သ ဆရာတော်များတက်ရောက်ခဲ့သည်။
အထက်မြန်မာပြည် မ.ဘသ အရေးပေါ်အစည်းအဝေးကို
မန္တလေးမြို့ ၆၃လမ်း ၊ လမ်း၃၀ဒေါင့်တွင် နံနက်၈နာရီမှ
တက်ရောက်ကြပါရန် မ.ဘ.သ ဆရာတော်များနှင့်
တောင်သာ မ.ဘ.သ ဆရာတော်မှ
၆၃လမ်း ၊ လမ်း၃၀ဒေါင့် ချမ်းအေးသာဇံမြို့နယ်
ဆန္ဒထုတ်ဖော်မည့်အချိန် ။ ။
မနက် ၈နာရီ မှ ၁၁နာရီအထိ
ကိုမင်းမင်း = ၀၉-၄၄၄၀၁၂၈၄၇
ကိုချစ်ကို = ၀၉-၄၀၂၇၆၃၀၄၀
လူငယ်များ၏ မေးခွန်းများကို ဖြေကြားပေးနေသော အိုဘားမား၊ ဓာတ်ပုံ - ဂျေမောင်မောင်(အမရပူရ)
မြန်မာနိုင်ငံကို ပြန်ရောက် လာခွင့်ရတာဟာ အံ့ဩစရာပါပဲ။ အားလုံးပဲ ထိုင်ကြပါ၊ ထိုင်ကြပါ။ကျွန်တော်တို့ ဆိုင်းဘုတ်တွေ မြင်နေရတယ်။ ‘‘ပြုပြင်ပြောင်းလဲရေးက အတုအယောင်ပဲ’’၊ ‘‘အပြောင်းအလဲ’’။ အိုကေ။ ကောင်းပြီ။ ခင်ဗျားတို့ အနေနဲ့ ပြီးရင် မေးခွန်းတွေမေးဖို့ အခွင့်အရေးရပါမယ်။ ဟုတ်ပြီ။ ဒါတွေကို ဘေးဖယ်ထား လိုက်ပါ။ ကျွန်တော်တို့ ဒီအတွက် ပဲ ဒီခန်းမကို ရောက်နေတာလေ။ ကြည့်ပါ။ ခင်ဗျားတို့ဟာ ဒီလို ခန်းမတစ်ခုထဲကို ရောက်နေရင် ဆန္ဒပြနေစရာမလိုပါဘူး။ ဘာဖြစ် လို့လဲဆိုတော့ မေးခွန်းတွေကို တိုက်ရိုက်မေးနိုင်လို့ပဲ ဖြစ်တယ်။
လွန်ခဲ့တဲ့ ၂နှစ်က ကျွန်တော်ဟာ အမေရိကန်သမ္မတတစ်ဦးအနေနဲ့ ဒီနိုင်ငံကို ပထမဆုံးအကြိမ် ရောက်လာခဲ့တယ်။ ကျွန်တော်တို့ကို ဖော်ဖော်ရွေရွေ၊ ပျူပျူငှာငှာ နှုတ်ဆက်ခဲ့တဲ့အတွက်အလေးအနက် ခံစားမိပါတယ်။ နှစ်နိုင်ငံလုံးရဲ့ အလံတွေကို ဝှေ့ယမ်းနှုတ်ဆက်နေတဲ့ ကလေး လေးတွေကို မြင်ခဲ့ရတယ်။ ပြီး တော့ ကျွန်တော်ဟာ ဒီနိုင်ငံရဲ့ ယဉ်ကျေးမှုနဲ့ ကွဲပြားခြားနားတဲ့ ဓလေ့ထုံးစံတွေကို တွေ့မြင်ရပြီး စိတ်အားတက်ကြွမိခဲ့တယ်။ ကွဲပြားတဲ့ ယုံကြည်မှု၊ လူ့အဖွဲ့အစည်းအသီးသီးရဲ့ မတူညီတဲ့ဘာသာရေးဆိုင်ရာနေရာတွေကိုတွေ့ခဲ့ရတယ်။ ဒီနေ့လည်း ကျွန် တော်အဲဒီလိုမျိုး နောက်တစ်ကြိမ် ခံစားမိခဲ့ပြန်ပါပြီ။ ခေတ်သစ် မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ မွေးဖွားသန့်စင်ရာ နေရာလို့ ဆိုနိုင်မယ့် အတွင်းဝန်များရုံး (ဝန်ကြီးများရုံး)ကို သွား ရောက် လည်ပတ်ဖို့ အခွင့်အရေး ရခဲ့ပါတယ်။ ဗမာ၊ တရုတ်၊ အိန္ဒိယ၊ ဗုဒ္ဓဘာသာ၊ မွတ်စလင်၊ ဟိန္ဒူနဲ့ ခရစ်ယာန်တွေ အားလုံး ငြိမ်းချမ်းစွာ အတူယှဉ်တွဲနေထိုင်နိုင်မယ့် ဒီမိုကရေစီစနစ်ရဲ့Blue-printပါပဲ။ ကွဲပြားတဲ့ယဉ်ကျေးမှု၊ ကိုးကွယ်ယုံကြည်မှုတွေ အများအပြားရှိနေခြင်းရဲ့ သာဓကကောင်းတစ်ခုပါ။ ပြီးတော့ ဒီနိုင်ငံမှာ မတူညီတဲ့ ယဉ်ကျေးမှုဓလေ့ထုံးစံတွေ ကြွယ်ကြွယ်ဝဝတည်ရှိနေခြင်းနဲ့ ဒီဒေသရဲ့ ရှေ့အလားအလာကို ညွှန်ပြနေတဲ့ နက်နဲသိမ်မွေ့တဲ့ သင်္ကေတတစ်ရပ်လည်း ဖြစ်ပါတယ်။
ကျွန်တော်ကမ္ဘာပတ်ပြီး ခရီးသွားခဲ့တယ်။ ဥရောပကနေအာဖရိက၊ တောင်အမေရိကပြီး တော့ အရှေ့တောင်အာရှကိုပေါ့။အဲဒီအခါ ကျွန်တော်သဘောကျ တဲ့ အရာတွေထဲက တစ်ခုဟာ လူငယ်လူရွယ် ယောက်ျားလေး၊ မိန်းကလေးတွေနဲ့ တွေ့ဆုံရတာ ပါပဲ။ ခင်ဗျားတို့လိုပေါ့။ အစည်း အဝေးခန်းမကြီး တစ်ခုမှာ တွေ့ဆုံရတဲ့အခါ ပိုပြီး ပျော်စရာကောင်းပါတယ်။ ပြီးတော့ ပိုပြီးလည်း အရေးပါလာတယ်။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ ခင်ဗျားတို့ဟာ ဒီနိုင်ငံနဲ့ ဒီဒေသရဲ့ အနာဂတ်ကို အဆုံး အဖြတ်ပေးရမယ့် ငယ်ရွယ်တဲ့ ခေါင်းဆောင်လေးတွေ ဖြစ်နေလို့ ပဲ။ ဒီတော့ ကျွန်တော်က ကိုယ့်ရဲ့ ရည်ညွှန်းမှတ်ချက်တွေကို လိုရင်းရောက်အောင် တိုတိုတုတ်တုတ်ပဲပြောမယ်။ ဘာဖြစ်လို့လဲ ဆိုတော့ ကျွန်တော်က ခင်ဗျားတို့ဆီက မေးခွန်းတွေနဲ့ မှတ်ချက်တွေကို ရနိုင်သမျှ လိုချင်လို့ပါ။
အမေရိကန် ပြည်ထောင်စု ရဲ့ သမ္မတအနေနဲ့ ကျွန်တော်ဟာ အမေရိကန်နဲ့ အရှေ့တောင်အာရှ ဒေသရဲ့ ဆက်ဆံရေးကို ပိုပြီး နက်ရှိုင်းလာအောင် အလေးထားလုပ်ဆောင်ပါတယ်။ ပြီးတော့အရှေ့တောင်အာရှရဲ့ လူငယ်လူရွယ် တွေနဲ့ပေါ့။ ကျွန်တော့်လုပ်ဆောင်မှုမှာ သာမန်ထက်ပိုတဲ့အကြောင်းပြချက်တွေ ရှိခဲ့ပါတယ်။ ကျွန်တော့်ကလေးဘဝအချိန်တချို့ကို အရှေ့တောင်အာရှဒေသမှာ ကုန်ဆုံးစေခဲ့တယ်။ အင်ဒိုနီးရှားမှာပါ။ဒါဟာအရှေ့တောင်အာရှနဲ့ ပတ်သက်လာရင် ကျွန်တော့်ကို ထူးခြားတဲ့ဆက်နွှယ်မှု၊ ထူးခြားတဲ့ ခံစားချက်မျိုးဖြစ်ပေါ်လာစေပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ဒီအချက်တွေကို ကျွန်တော်လုပ်ဆောင်နေတဲ့ အဓိက အချက်ဟာ အာဆီယံဆယ်နိုင်ငံဆိုတာ ကမ္ဘာ့လူဦးရေရဲ့ ဆယ်ပုံတစ်ပုံ မှီတင်းနေထိုင်ရာနေရာ ဖြစ်နေလို့ပဲ။ ပြီးတော့ အရှေ့တောင် အာရှဒေသမှာ နေထိုင်သူ လူဦးရေစုစုပေါင်းရဲ့ သုံးပုံနှစ်ပုံဟာ အသက်(၃၅)နှစ်အောက် အရွယ်တွေပါ။ ဒီဒေသဟာစီးပွားရေးအရ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်လာပြီး ဒီမိုကရေစီထွန်းကားလာတဲ့ နေရာဖြစ်ပါတယ်။ သမုဒ္ဒရာတွေ၊ ကျွန်းတွေ၊ သစ်တောတွေ၊ မြို့ပြတွေနဲ့ အမျိုးမျိုးကွဲပြားတည်ရှိတဲ့ ဒေသဖြစ်တယ်။ လူမျိုးမတူညီတဲ့၊ ကိုးကွယ်ယုံကြည်မှုကွဲပြားတဲ့သူတွေ နေထိုင်ကြတယ်။ အာဆီယံ ဒေသဟာ ၂၁ ရာစုကို ပုံသွင်းပါလိမ့်မယ်။
အရှေ့တောင်အာရှလူငယ်စွမ်းရည် အစီအစဉ်ကို ကျွန်တော်အကောင်အထည်ဖော်ပေးခဲ့တာ ပဲ။ အနာဂတ်အစိုးရ၊ လူမှုအသင်းအဖွဲ့၊ ပညာရေးနဲ့ စွန့်ဦးတီထွင်မှု ကဏ္ဍတွေမှာ ခေါင်းဆောင်ဖြစ် လာမယ့် မျိုးဆက်သစ်တွေနဲ့ အမေရိကန်ရဲ့ ဆက်နွှယ်မှုကို ပိုနက်ရှိုင်းစေချင်လို့ပါ။ ခင်ဗျားတို့လိုမျိုးငယ်ရွယ်တဲ့ ခေါင်းဆောင်လေးတွေ တစ်သောင်း ကျော်လောက်ဟာ YSEALI ကွန်ရက်ကို ချိတ်ဆက်ခဲ့တယ်။ စိန်ခေါ်မှုတွေကို ဖြေရှင်းဖို့၊ လျင်လျင် မြန်မြန် တိုးတက်နေတဲ့ ဒေသမှာ အပြန်အလှန်လေးစားမှု၊ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုတို့ကိုအခြေခံတဲ့ စိတ်ဓာတ်တွေနဲ့ အခွင့်အရေးတွေကို အမိအရ ဆုပ်ကိုင်ရယူဖို့ ဖြစ်တယ်။ ဒီနှစ်အစောပိုင်းက အခုလိုပဲ ခန်းမဆောင်တစ်ခုမှာ ကျွန်တော်ဆွေးနွေးပွဲတစ်ခု လုပ်ခဲ့ဖူး တယ်။ မလေးရှားမှာပါ။ ဒီနေ့မှာတော့ကျွန်တော်ဟာ ခင်ဗျားတို့နဲ့အတူ နောက်ထပ် ခြေလှမ်းသစ် တွေ ရှေ့ဆက်ဖို့ လိုလားပါတယ်။
လွန်ခဲ့တဲ့ ခြောက်နှစ်လောက်က အမေရိကန်သမ္မတအဖြစ်စပြီး ကျွန်တော်တာဝန်ယူတော့ ကျွန်တော်ပြောခဲ့တယ်။ အမေရိကန်ဟာ လက်သီးဆုပ်ထားတာကို ဖြေချလိုက်တဲ့ဘယ်လိုနိုင်ငံကိုမဆို လက်ကမ်းဖို့အသင့်ပဲဆိုတာကိုပါ။ အခုဒီနိုင်ငံဟာ တင်းကျပ်တဲ့ အုပ်ချုပ်မှုတွေအောက်မှာ ဆယ်စုနှစ်တွေကြာမြင့်တဲ့ထိ ဖြတ်သန်းခဲ့ပြီးတဲ့နောက် ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်အနည်းငယ် အတွင်းမှာထင်သာမြင်သာ တိုးတက်မှုတွေ ရှိလာခဲ့တယ်။ မြန်မာနိုင်ငံမှာမျှော်လင့်ချက်နဲ့ ပတ်သက်ပြီး ခံစားချက်က ပိုအားကောင်းလာတယ်။ ကမ္ဘာကြီးနဲ့ ပြန်ပြီး နီးစပ်လာတယ်။ အခုဆိုရင် ဒေသတွင်းနဲ့ ကမ္ဘာ့ရေးရာတွေမှာ ထဲထဲဝင်ဝင် ပြန်ပါဝင်နိုင်မယ့် ကဏ္ဍမျိုးဖြစ်လာပြီ။
ဒါပေမဲ့ ပြုပြင်တိုးတက်မှု ခရီးရှည်ကြီးဟာ တစ်ညတည်းနဲ့ အပြီး မသတ်နိုင်မှန်း ကျွန်တော်တို့သိ တယ်။ အတားအဆီး၊ အနှောင့် အယှက်တွေ၊ အစပြုပုံ အမှားတွေ ရှိလိမ့်မယ်။ နောက်ပြန်သွားတဲ့ ကိစ္စတွေလည်း ရှိကောင်းရှိမယ်။ အမေရိကန်ရဲ့ ၂၃၈ နှစ်ကြာ သမိုင်းကြောင်းမှာလည်း ဒီအဖြစ် တွေအမှန်တကယ်ကြုံခဲ့ဖူးတယ်။ မြန်မာနိုင်ငံမှာတော့ လွန်ခဲ့တဲ့ ၂ နှစ်၊ သုံးနှစ်အတွင်းမှာ တွေ့ကြုံခဲ့တယ်။ ကျွန်တော်တို့ဟာ တိုး တက်မှုတချို့ကို တွေ့မြင်ခဲ့ရပြီ။ ဒီတိုးတက်မှုတွေကို အသိအမှတ် ပြုသင့်တယ်။
ကျွန်တော်တို့ သိထားပြီးသားပါ။ ဒါပေမဲ့ တကယ်တမ်းအချက်အလက်တွေအရ နိုင်ငံရေး အကျဉ်းသားတွေ လွတ်မြောက် လာတယ်။ လူတွေက နိုင်ငံရေးဆွေးနွေးမှုတွေမှာ ပိုပြီးတော့ပါဝင်လာတယ်။ လွှတ်တော်တစ်ရပ်ရှိလာပြီ။ အရပ်ဘက်အဖွဲ့ အစည်းတွေ ထွက်ပေါ်လာတယ်။ ဒီလို အခြေအနေတွေ ရှိပေမယ့်တချို့သော ပြုပြင်ပြောင်းလဲမှု တွေကတော့ လုံလောက်တဲ့ မြန် ဆန်တိုးတက်မှု မရှိသေးဘူး။ သတင်းမီဒီယာသမားတွေ၊ လူ နည်းစု တိုင်းရင်းသားတွေကို ဖိနှိပ်တိုက်ခိုက်မှုတွေ ရှိနေသေးတယ်။ အမေရိကန်အနေနဲ့ ရခိုင်ပြည် နယ်နဲ့ ပတ်သက်ပြီး လူသားချင်းစာနာမှု ကဏ္ဍအတွက် အလေးအနက် စိုးရိမ်နေဆဲ ဖြစ်တယ်။လူနည်းစုတချို့ဟာ ခွဲခြားဆက် ဆံမှုနဲ့ ဖိနှိပ်အနိုင်ကျင့်မှုတွေကို ခံစားနေရတုန်းပဲ။
ဒီခရီးစဉ်မှာ ကျွန်တော်ဟာ သမ္မတ ဦးသိန်းစိန်ရယ်၊ ဒေါ် အောင်ဆန်းစုကြည်ရယ်နဲ့ တွေ့ဆုံခဲ့တယ်။ ပြီးတော့ လွှတ်တော်အမတ်တွေ၊ အရပ်ဘက်အဖွဲ့အစည်း ခေါင်းဆောင်တွေနဲ့လည်း တွေ့ဆုံဖြစ်ခဲ့တယ်။ ကျွန်တော်တို့
အဓိကဆွေးနွေးခဲ့တာက လူ့အခွင့်အရေးနဲ့ လွတ်လပ်ခွင့်ကို အသေအချာလေးစားတန်ဖိုး ထားဖို့ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီနိုင်ငံရဲ့ပြည်သူ
တွေဟာ ဒေသတွင်းမှာရော ကမ္ဘာပေါ်မှာပါ သူတို့နဲ့ မှန်ကန်ထိုက်တန်တဲ့ နေရာကို ရောက်ရှိနိုင်လိမ့်မယ်။ နောက်ပြီးကျွန်တော်ဂုဏ်ယူစွာနဲ့ ကြေညာချင်တာက မြန်မာနိုင်ငံကို Peace Corps ရောက်ရှိလာမယ် ဆိုတာပါပဲ။ ဒါဟာ ကျွန်တော်တို့ ပြည်သူတွေကြား ပေါင်းကူးမှုကို ပိုပြီး လေးနက်ခိုင်မာစေဖို့ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီအခြေအနေဟာ အမေရိကန် လူငယ်တွေကို မြန်မာနိုင်ငံက လူ ငယ်တွေနဲ့ ထိတွေ့ဆက်နွှယ်ဖို့ အရမ်းကောင်းမွန်တဲ့ အခွင့်အရေး မျိုးဖန်တီးပေးလိမ့်မယ်။ ဒီလိုပြည်သူအချင်းချင်းထိတွေ့ ဖလှယ်မှုဟာ အစိုးရချင်းထိတွေ့ ဆက်နွှယ်မှုလိုပဲ အရေးကြီးတယ်။ပိုပြီး အရေးပါတာလည်း ဖြစ်ချင်ဖြစ်မယ်။
ဒါကြောင့် တိုးတက်ပြောင်း လဲမှုတွေကတော့ မလွဲဧကန် ဖြစ် လာမှာပဲ။ သမိုင်းကြောင်းဟာ အမြဲတမ်းရှေ့ကို ချီတက်နေတာမဟုတ်ဘူး။ သမိုင်းဟာတစ်ခါတလေဘေးကို ယိုင်သွားတတ်တယ်။ တစ်ခါတလေ နောက်ပြန်ဆုတ်သွားနိုင်တယ်။ နှစ်ပေါင်းများစွာ ပဋိပက္ခတွေဖြစ်ခဲ့ပြီးတဲ့အချိန် ယုံကြည်မှုကို ပြန်လည်တည်ဆောက်တဲ့အခါ အချိန်ယူရမှာပဲ။ အတိတ်ကိုပြန်ကြည့်ပြီး ဖြစ်ရပ်ဆိုးတွေကြောင့်ရလာတဲ့အနာတရတွေဟာ သတ္တိကို ဆောင်ကြဉ်းပေးတယ်။ လွတ်လပ်မှုနဲ့ဒီမိုကရေစီကို လက်တွေ့ရယူနိုင်ဖို့အတွက် ကောင်းမွန်တဲ့ ယုံကြည်စိတ်နဲ့ စိတ်ဓာတ်ခွန်အားမျိုး လိုအပ်တယ်။ ပြီးတော့သည်းခံနိုင်စွမ်း၊ မတူကွဲပြားမှုတွေကို လေးစားတန်ဖိုးထားမှုတွေအပြင် ပြည်သူလူထုအားလုံးရဲ့ ဆန္ဒအလျောက်
ပါဝင် ကူညီဆောင်ရွက်မှုတွေလည်း လိုအပ်ပါတယ်။ အမေရိကန်ပြည်သူတွေက အခွင့်အရေးတွေ၊ လွတ်လပ်မှုတွေဆိုတာဟာ အလကားရလာတာမဟုတ်မှန်း သိကြတယ်။ စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းတွေ၊ စိတ်မသက်မသာဖြစ်မှုတွေကိုယုံကြည်စိတ်နဲ့ ရုန်းကန်ဖြတ်သန်းရင်း အရယူနိုင်ခဲ့တာဖြစ်တယ်။ ဒီလိုရုန်းကန်ရမှုတွေကို ဦးဆောင်တဲ့ သူတွေဟာလူငယ်ပိုင်းတွေ ဖြစ်နေလေ့ရှိတယ်။ တဖြည်းဖြည်းချင်းတည်ဆောက်ယူရတာကို လက်ခံရင်းအချိန်အတိုင်းအတာတစ်ခုမှာ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုကို ပြီးပြည့်စုံစေခဲ့ပါတယ်။
အခု ကျွန်တော်နားလည် ထားတဲ့ မြန်မာစကားပုံ တစ်ခုရှိ တယ်။ ကျွန်တော်ပြောမယ့်စကား မှန်၊ မမှန်သေချာအောင် အရင် လုပ်လိုက်ဦးမယ်။ ငုပ်မိသဲတိုင် . . . ကျွန်တော့်ကို ကူကြပါဦး။ အဲဒါ မှန်ရဲ့လား။ တက်နိုင်ဖျားရောက်။ (လက်ခုပ်သံများ)
မြန်မာစကားကို နားမလည်တဲ့ ကျွန်တော်အပါအဝင် (ရယ်သံများ) အမေရိကန်တွေအတွက် ကတော့ ဒီစကားရဲ့ အဓိပ္ပာယ်ဟာ ရေထဲကို ငုပ်လျှိုးသွားမယ်ဆိုရင် အောက်ခြေသဲမြေထိ ရောက်ရပါ မယ်။ အမြင့်ကို တက်မယ်ဆိုရင် ထိပ်ဆုံးနေရာထိ ရောက်ရပါ မယ်။ မဆုတ်မနစ်အားထုတ်မှု ကို ထိန်းထားရမယ်ဆိုတဲ့ သဘောပါ။
အမေရိကန်ဟာ ဒီနိုင်ငံနဲ့ ဒီဒေသရဲ့ လူငယ်လူရွယ်တွေကို သူတို့ မျှော်လင့်တဲ့ အမြင့်ဆုံးနေ ရာ ရောက်တဲ့အထိ တက်နိုင်ဖို့ အတွက် ကူညီသွားဖို့ စိတ်ပိုင်း ဖြတ်ထားပါတယ်။ ဒီနိုင်ငံအပေါ် ကျွန်တော်တို့ ယုံကြည်ထားတယ်။ ဒါကြောင့်လည်း ကျွန်တော်ဟာ ပြီးခဲ့တဲ့ နှစ်အနည်းငယ်အတွင်း ဒီကို နှစ်ကြိမ်တိုင်တိုင် ရောက်ခဲ့ တာပေါ့။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ ကျွန်တော်တို့ဟာ ဒီမိုကရေစီ အခြေခံတွေဖြစ်တဲ့ တာဝန်ယူနိုင် တဲ့ တုံ့ပြန်နိုင်တဲ့ အနာဂတ်မျိုးကိုတွေ့မြင်နေရလို့ပဲ။ အဲဒီအနာဂတ်မှာ နိုင်ငံရေး တက်ကြွလှုပ်ရှား သူတွေ လွတ်လပ်လာမယ်၊ ဂျာ နယ်လစ်တွေဟာ အမှန်တရား နောက် လိုက်ခွင့်ရလာမယ်၊ လူနည်းစု တိုင်းရင်းသားတွေဟာ အကြောက်တရားမရှိဘဲ နေထိုင်လာနိုင်မယ်။
ဒါကြောင့် ကျွန်တော်တို့ ဟာ ဒီနိုင်ငံအပေါ် စွန့်စားရွေး ချယ်ခဲ့တယ်။ ဒါ့အပြင် ဒီဒေသတစ်ခုလုံးကိုလည်း စွန့်စားရွေးချယ်လိုက်တယ်။ ဘာဖြစ်လို့လဲ ဆိုတော့ ကွဲပြားတဲ့ နိုင်ငံတွေ၊ ကိုးကွယ်ယုံကြည်မှုတွေ၊ တိုင်းရင်းသားမျိုးနွယ်တွေဟာ အတူတကွ ပေါင်းစည်းလာပြီး အပြင်လောကရဲ့ စိန်ခေါ်မှုတွေကို ဦးတည် ရင်ဆိုင်လာကြတယ်။ သဘာဝပတ်ဝန်းကျင် ထိန်းသိမ်းရေး၊ လူ့အခွင့်အရေး၊ ပညာရေးအဆင့် မြှင့်တင်မှု၊ ဆင်းရဲမွဲတေမှု တိုက်ဖျက်ရေး၊လုပ်ငန်းခွင် နယ်ပယ်၊ အစိုးရနဲ့ အသင်းအဖွဲ့တွေမှာ အမျိုးသမီးတွေရဲ့ အခန်းကဏ္ဍမြှင့်တင်ရေး၊ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်တွေကို တွန်းလှန်နိုင် စွမ်းမြှင့်တင်ရေး၊ စီးပွားရေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု စတာတွေမှာ နောက်ထပ် လူငယ်တွေဟာ ခင် ဗျားတို့ရဲ့ ခြေရာကို လိုက်နင်းရ မယ်။ ကောင်းမွန်တဲ့ ပညာသင်ယူမှုနဲ့ အခွင့်အလမ်းတွေ ရှိရ မယ်။
ငယ်ရွယ်တဲ့ ခေါင်းဆောင်တွေဟာ ဒေသတွင်းမှာ ရှိနေတဲ့ ကွဲပြားခြားနားမှုတွေကို အားနည်းချက် တစ်ခုအနေနဲ့ လက်ခံယုံကြည်ရမှာ မဟုတ်ဘူး။ ခွန်အားတစ်ရပ်လို့ ခံယူရမှာဖြစ်တယ်။ ကျွန်တော်တို့ဟာ တစ်ဦးချင်းအရ ကွဲပြားခြားနားမှုတွေ အများကြီး ရှိတယ်ဆိုတာကို သတိပြုရမယ်။ မတူညီတဲ့ ဓလေ့ထုံးစံတွေ၊ လူ့အသိုက်အဝန်းတွေပေါ့။ ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ဟာအတူတကွ ပေါင်းစည်း လုပ်ဆောင်တဲ့အခါပိုပြီး သန်မာ အားကောင်းလာလိမ့်မယ်။
ဒီတော့ ဒီဒေသ၊ ခင်ဗျားတို့ ဒေသရဲ့ အနာဂတ်ကို စစ်အာဏာရှင်၊ ဒါမှမဟုတ် စစ်တပ်ရဲ့ အလိုအတိုင်း ဖော်ဆောင်ရမှာ မဟုတ်ဘူး။ ဒီဒေသရဲ့ အနာဂတ်ကို စွန့်ဦးလမ်းပြသူတွေ၊ တီထွင်ဖန်တီးသူတွေနဲ့ အိပ်မက်ကို လက်တွေ့ အကောင်အထည် ဖော်သူတွေက ဖန်တီးရမှာ ဖြစ်တယ်။ ခင်ဗျားတို့ဟာ အဲဒီအရာတွေကို လက်တွေ့ လုပ်ဆောင်ရမယ့် ခေါင်းဆောင်တွေ ဖြစ်လာရမယ်။ ခင်ဗျားတို့ရဲ့ မျိုးဆက်ဟာ လူ့အသိုင်းအဝိုင်းကို ပုံဖော်ရာမှာ တခြားအရင် မျိုးဆက် အားလုံးထက် ပိုပြီးတော့ အလားအလာကောင်း တွေ ပိုင်ဆိုင်ထားတယ်။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ ခင်ဗျားတို့မှာ နေရာတိုင်းက စွမ်းအားနဲ့ ဗဟုသုတတွေ ရှိနေလို့ပဲ။ ခင်ဗျားတို့မှာ မိဘတွေ၊ ဘိုးဘွားတွေထက် ပိုင်းခြားသိမြင်နိုင်စွမ်းနဲ့ အတွေ့အကြုံကောင်းတွေ ပိုများလာတယ်။ ပြီးတော့ ခင်ဗျားတို့ဟာ အခုအချိန်မှာ ဒီဒေသကြီး တစ်ခုလုံးအ ပြင် တစ်ကမ္ဘာလုံးက လူငယ်တွေ နဲ့ အတွေ့အကြုံ၊ ဗဟုသုတတွေ မျှဝေဖို့ အခွင့်အလမ်းကောင်းတွေ ရှိနေပြီ။ လွန်ခဲ့တဲ့ နှစ် ၂၀၊ ဒါမှမဟုတ် နှစ် ၅၀ လောက်က ဒါမျိုး မဖြစ်နိုင်ဘူးလေ။
လမင်းဦးဟာ မြန်မာနိုင်ငံသားတွေရဲ့ ဇာတ်ကြောင်းကို ပြောပြနိုင်ဖို့ သူ့ရဲ့အင်အားကို အသုံးချခဲ့တယ်။ အမေရိကန်က ဂတ်တီစ်ဘာ့ဂ် ကောလိပ်မှာ သူပညာသင်ယူခဲ့တယ်။ Facebookကနေ စောင့်ကြည့်ရင်း သိလာတဲ့အပြောင်းအလဲတွေက မွေးရပ်မြေကို ပြန်သွားဖို့ သူ့ကို လှုံ့ဆော်ပေးခဲ့တယ်။ နောက်တော့ မြန်မာ့လယ်သမားတွေရဲ့ အခက်အခဲ တွေအကြောင်း ဖော်ပြထားတဲ့ ဆုရ Documentary တစ်ခုကို ဖန်တီးနိုင်ခဲ့တယ်။ ပြီးတော့ သူကပြောခဲ့တယ်။ ‘‘ကျွန်တော့် နိုင်ငံဟာ နှစ်ပေါင်းများစွာ တံခါးပိတ်နေခဲ့တယ်။ နောက်ထပ် ပြောပြစရာ ဇာတ်လမ်းတွေ အများကြီး ရှိသေးတယ်’’ဆိုတာပါပဲ။ ဒီတော့ ခင်ဗျားတို့ လူငယ်တွေမှာ ပြောစရာ ရှိတာတွေကို ပြောပြဖို့ အခွင့်အရေးရှိတယ်။ ဒီလို ဇာတ်လမ်းတွေကို ပြောပြရမယ်။ ခင်ဗျားတို့မှာ ဒီမိုကရေစီ အစိုးရ တစ်ရပ်အတွက် အရမ်းအရေးပါတဲ့ ဖွဲ့ စည်းအုပ်ချုပ်ပုံ ဥပဒေတွေကို တိုး တက်လာအောင် မြှင့်တင်လုပ်ဆောင်နိုင်တဲ့ စွမ်းအားမျိုး ရှိတယ်။ ပြီးတော့ အရပ်ဘက် အဖွဲ့အစည်းတွေ၊ သမာသမတ်ကျတဲ့ တရားစီရင်မှုစနစ်၊ လွတ်လပ်တဲ့ သတင်းထုတ်ပြန်မှု၊ ကိုယ်ပိုင် စီးပွားရေး လုပ်ငန်းတွေ ဖော်ဆောင်ဖို့က အစပေါ့။ ဒါတွေကို တည်ဆောက်ဖို့က ဒီနိုင်ငံမှာအရမ်းလိုအပ်နေတယ်။
မြန်မာလို နိုင်ငံမျိုးတွေမှာ ခင်ဗျားတို့ လူငယ်တွေက အဲဒီလို နည်းလမ်းတွေကနေ ပါဝင်ကူညီဖို့ဆိုတာ အရမ်းအရေး ပါတယ်။ ခင်ဗျားတို့ကို ဥပမာတစ်ခုလောက် ပြောပြပါရစေ။ ရိုင်ယန်လူးဝစ်မက်ဒရစ်ဟာ ဂျာနယ်လစ် တစ်ယောက်ဖြစ်လာဖို့ အိပ်မက်မက်ခဲ့သူဖြစ်တယ်။ သူချစ်မြတ်နိုးတဲ့ ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံမှာ တိုင်ဖွန်းမုန်တိုင်းကြီး တိုက်ခတ်ခဲ့ပြီးတဲ့ နောက် အပျက်အစီးတွေကြား မတ်တတ်ရပ်နေတဲ့ အချိန်မှာ သူ ဟာ ကိုယ့်နိုင်ငံသားတွေနဲ့အတူ ပြန်လည် တည်ဆောက်ရေး ကဏ္ဍရဲ့ အစိတ်အပိုင်း တစ်ရပ်အဖြစ် ပါဝင်ဖို့ ရွေးချယ်ခဲ့တယ်။ ဒီနေ့မှာတော့ သူကိုယ်တိုင် ပါဝင်ပူးတွဲ တည်ထောင်ထားတဲ့ အဖွဲ့အစည်း ဟာ ဆိုလာအမိုးပြားတွေ ဖြန့်ဝေပြီး လူ့အဖွဲ့အစည်းရဲ့ ဖွံ့ဖြိုးမှုနဲ့ ပြန်လည် နာလန်ထမှု အတွက် ကူညီပေးနေပါပြီ။ သူဟာကိုယ်ပိုင် ကျွမ်းကျင်မှုတွေကို အသုံးချပြီး တခြား ဖွံ့ဖြိုးဆဲ တိုင်းပြည်တွေက လူငယ်တွေကို ကိုယ့်နိုင်ငံ၊ကိုယ့်ပြည်သူတွေကို တတ်စွမ်းသ၍ ကူညီနိုင်အောင် တိုက်တွန်းနေ တယ်။ ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ အတိုင်းအတာထိ တွေးတောရင်း ဒေသတွင်း အတိုင်းအတာနဲ့ စပြီး လုပ်ဆောင်တယ်။ လူသားတွေရဲ့ ဂုဏ်သိက္ခာဆိုတာ တစ်ကမ္ဘာလုံး လေးစားလိုက်နာရတဲ့ အရာတစ်ခု ဖြစ်ရုံမျှ မကဘဲ လူ့အခွင့်အ ရေး တစ်ရပ်လည်း ဖြစ်တယ်ဆို တာ ကျွန်တော်တို့ အမြဲတမ်း အမှတ်ရနေအောင် လုပ်ဆောင်ဖို့အတွက် ခင်ဗျားတို့မှာ အစွမ်းရှိ တယ်။
ပြီးတော့ ဝေဝေနုဟာ နိုင်ငံရေး အကျဉ်းသား တစ်ယောက်အနေနဲ့ သူ့ရဲ့ငယ်ဘဝ သက်တမ်းခုနစ်နှစ်လောက်ကို သံတိုင်တွေနောက်မှာ ဖြတ်သန်းခဲ့ရတယ်။ အဲဒီအချိန်တွေကို ဘဝရဲ့ တက္ကသိုလ်လို့ သူက ခေါ်ခဲ့တယ်။ ဒီနေ့မှာတော့ သူဟာ အဲဒီလို ခက်ခက်ခဲခဲ ရယူခဲ့ရတဲ့ တက္ကသိုလ်ဘွဲ့မျိုးကို သည်းခံနိုင်မှု စွမ်းရည်အတွက် လက်တွေ့ အသုံးချနေပြီ။သူပြောတာက “ကျွန်မတို့ဟာ လည်း အကြောင်းတရား တစ်ခုတည်းအတွက် အရာများစွာကို စတေးခဲ့ရတယ်။ အဲဒါ ဒီမိုကရေစီပဲ”တဲ့။
မုန်းတီးမှုတွေကို ကျော်လွှားဖို့အတွက် ခင်ဗျားတို့မှာ အခွင့်အရေးရှိတယ်။ ချုပ်တည်းမှုထက် လွတ်မြောက်မှုဆီ သေချာဦးတည်နိုင်အောင် လုပ်ဆောင်ပါ။ ခင်ဗျားတို့ တိုင်းပြည်ကို အုပ်ချုပ်နေတဲ့ အကြောင်းတရားဟာ ကြောက်ရွံ့ခြင်းထက် မျှော်လင့်ချက် ဖြစ်နေတာ သေချာအောင် လုပ်ပါ။ ခင်ဗျားတို့ဟာ ကိုယ့်နိုင်ငံကို ကွဲပြားပြီး သစ်လွင်တဲ့ လမ်းကြောင်းတစ်ခုပေါ် သတ်မှတ်ပေးနိုင်တဲ့ စွမ်းအားမျိုး ရှိပါတယ်။
အမေရိကန်က ခင်ဗျားတို့ကို လက်တွဲဖော်အဖြစ် အလိုရှိနေတဲ့ အကြောင်းတရား အားလုံးက ဒါပါပဲ။ ကျွန်တော်တို့က ခင်ဗျားတို့ရဲ့ အနာဂတ်ကို ကိုယ်တိုင်ပုံဖော်ရာမှာ အတတ်နိုင်ဆုံး နည်းလမ်းမျိုးနဲ့ ကူညီပေးချင်တယ်။ ကမ္ဘာကြီးကို ပြောင်းလဲဖို့အတွက် ခင်ဗျားတို့ လိုအပ်တဲ့ ကိရိယာတွေ၊ အဆက်အသွယ်တွေ၊ အရင်းအမြစ်တွေကို ပိုင်ဆိုင်လာဖို့ ကျွန်တော်တို့က လိုလားတယ်။
ဒီတော့ ကျွန်တော်တို့ လုပ်ပေးနိုင်တဲ့ လမ်းကြောင်းတစ်ခုက ကျွန်တော့် အနေနဲ့ YSEALIကို ထင်ရှားမြင်သာတဲ့ တိုးချဲ့မြှင့်တင် မှု တစ်ခုနဲ့ ကြေညာလိုက်တာပါပဲ။ ဒီအသိအမြင် ဖလှယ်ရေး အစီအစဉ်အရ အရှေ့တောင်အာရှ နိုင်ငံတွေက လူငယ်ခေါင်းဆောင် ၅၀၀ကို နှစ်စဉ် အမေရိကန် ပြည်ထောင်စုဆီ ဖိတ်ခေါ်ပါတယ်။ ဒီလူငယ်တွေက သူတို့ရဲ့ ခေါင်းဆောင်မှု ပရော်ဖက်ရှင်နယ် စွမ်းရည်တွေ၊ အပြန်အလှန် ချိတ်ဆက် လုပ်ဆောင်မှုတွေ၊ အတွေ့အကြုံနဲ့ အတွေးအခေါ် ဖလှယ်မှုတွေ လုပ်ဆောင်ကြတယ်။ ပြီးရင်တော့ ကိုယ့်ဒေသနဲ့ ကမ္ဘာကြီးကို ပြောင်းလဲဖို့အတွက် ပိုမိုကောင်းမွန်တဲ့ ကြိုတင်ပြင်ဆင်မှုတွေနဲ့အတူ နေရပ်ကို ပြန်သွားကြပါတယ်။
ဒီလူငယ်တွေထဲက တချို့ဟာ သီတင်းငါးပတ်တာ ကာလအတွင်း အမေရိကန်ရဲ့ အကောင်းဆုံးသော တက္ကသိုလ် တချို့က လမ်းညွှန်သင်ပြမှုတွေကြောင့် အကျိုးဖြစ်ထွန်းခဲ့ပါလိမ့်မယ်။ စွန့်ဦးတီထွင်မှု၊ သဘာဝပတ်ဝန်းကျင် စောင့်ရှောက်မှု၊ လူမှုအဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့ လူ့အခွင့်အရေးလို ကဏ္ဍတွေမှာပေါ့။ တချို့တွေကတော့ အမေရိကန် ပြည်ထောင်စုအတွင်းက ဒေသဆိုင်ရာ အစိုးရအဖွဲ့အစည်းတွေ၊ NGO တွေကပရော်ဖက်ရှင်နယ် ပုဂ္ဂိုလ်တွေနဲ့ အလုပ်တွဲလုပ်ခွင့်ရပါလိမ့်မယ်။ ပြီးတော့ ဒီအစီအစဉ်မှာ ခင်ဗျားတို့တွေဘက်က အကျိုးအမြတ်ရှိသလိုပဲ ခင်ဗျားတို့ အမေရိကန်မှာ ရှိနေစဉ် အတောအတွင်း အမေရိကန် ပြည်သူတွေကလည်း ခင်ဗျားတို့ဆီကနေပြန်သင်ယူရတာတွေ ရှိပါလိမ့်မယ်။ ဒါကြောင့် ခင်ဗျားတို့ကချည်း ကျွန်တော်တို့ဆီက သင်ယူနေရတာတော့ မဟုတ်ပါဘူး။
အမေရိကန်ကနေ အတွေးအခေါ်သစ်တွေ၊ အတွေ့အကြုံ သစ်တွေ ပိုင်ဆိုင်ပြီး နေရပ်ပြန်သွားတဲ့အခါ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ သံရုံးတွေနဲ့ USAID အဖွဲ့တွေက ခင်ဗျားတို့ရဲ့ အိပ်မက်တွေ လက်တွေ့ အမှန်တကယ် ဖြစ်လာနိုင်အောင် လိုအပ်တဲ့ အထောက်အပံ့ နဲ့ အရင်းအမြစ်တွေ ကူညီပံ့ပိုးပါလိမ့်မယ်။ ဒါကြောင့် ဒီနေ့မှာ ကျွန်တော်က ဂုဏ်ယူစွာနဲ့ ကြေညာချင်တာက အမေရိကန်ဟာ နှစ်စဉ်နှစ်တိုင်း ဒီဒေသအတွင်းမှာ YSEALI အစည်းအဝေးတွေ ကျင်းပဖို့အတွက် နှိုးဆော်ဖိတ်ခေါ်တယ် ဆိုတာပါပဲ။ လူငယ်တွေအနေနဲ့ သူတို့ရဲ့ အောင်မြင်မှုတွေကို အပြန်အလှန် ဝေမျှဖို့ အခွင့်အရေးမျိုး ပေးအပ်ချင်တယ်။ ပြီးတော့ သူတို့အချင်းချင်း ချိတ်ဆက်ထားတဲ့ ကွန်ရက်ကို ပိုပြီးတော့ ပြီးပြည့်စုံလာစေချင်ပါတယ်။
ဒီတော့ ခင်ဗျားတို့ထဲက တချို့ဟာ ဒီအခွင့်အရေးကို ရယူနိုင်လိမ့်မယ်လို့ ကျွန်တော် မျှော်လင့်တယ်။ ခင်ဗျားတို့ထဲက အများစုဟာ ကျောင်းသားဘဝက ပြုပြင်ပြောင်းလဲရေး လှုပ်ရှားမှုတွေ လုပ်ဆောင်ခဲ့တဲ့ (ဒေါ်) အောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့ မင်းကိုနိုင်တို့ရဲ့ နေရာကို ဆက်ခံဖို့၊ တည်ငြိမ်အေးချမ်းပြီး ကြွယ်ဝချမ်းသာတဲ့၊ တိုးတက်ဖွံ့ဖြိုးတဲ့ အရှေ့တောင်အာရှရဲ့ ခေါင်းဆောင်တွေအဖြစ် ခင်ဗျားတို့အတွက် မှန်ကန်သင့်တော်တဲ့ နေရာကို ရယူကြဖို့ ကျွန် တော်မျှော်လင့်တယ်။ ခင်ဗျားတို့ သာ အဲဒီအတိုင်း လုပ်ဆောင် မယ်ဆိုရင် အမေရိကန် ပြည်ထောင်စုထက် ပိုကောင်းတဲ့ မိတ်ဆွေနဲ့ လက်တွဲဖော်မျိုး ထပ်မရှိနိုင်ဘူးဆိုတာ ကျွန်တော် ကတိပေးတယ်။
ကဲ၊ ကျေးဇူးအများကြီးတင် ပါတယ်။ (ကျေးဇူးတင်ပါတယ် မြန်မာဘာသာဖြင့်) အခုကျွန် တော်ခင်ဗျားတို့ဆီက မေးခွန်းတွေကို လိုချင်ပါတယ်။ (လက်ခုပ်သံများ)။။
သူရဦးရွှေမန်း၊ ဒါတွေ ထပ်ရှင်းပေးပါ
မဇ္ဈိမ သတင်းစာ၊ ၂၀-၁၁-၁၄။ စာ-၉။
ပြီးခဲ့တဲ့ နိုဝင်ဘာ ၁၈ ရက်နေ့က ပြည်ထောင်စု လွှတ်တော် နာယက သူရဦးရွှေမန်းဟာ နေပြည်တော်မှာ သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲ တစ်ခု လုပ်ခဲ့ပါတယ်။ ဒီသတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာ ဖွဲ့စည်းပုံ ပြင်ဆင်ရေး ကိစ္စ သူဘယ်လို လုပ်ကိုင်ဆောင်ရွက်မလဲ ဆိုတဲ့ အချက်နဲ့ အချိန်ဇယားတွေ ပါဝင်နေတဲ့အတွက် ဒီသတင်း တမဟုတ်ချင်း ပျံ့နှံ့သွားတာ တွေ့ရပါတယ်။ နိုဝင်ဘာ ၁၉ ပြည်တွင်းထုတ် သတင်းစာ ဂျာနယ်မျက်နှာတိုင်းလိုလိုမှာလည်း အဲဒီ သတင်း ဖော်ပြကြပါတယ်။ သူရဦးရွှေမန်း ပြောဆိုခဲ့တာတွေဟာ ရှင်းလင်းမှု ရှိပါရဲ့လား၊ ပြည်တွင်းထုတ် သတင်းစာတွေရဲ့ ဖော်ပြချက်တွေကရော မှန်ကန်မှု ရှိပါရဲ့လား၊ ဘယ်လို မရှင်းမလင်းတွေ ရှိနေသေးလဲ ဆိုတာ ဒီကနေ့ ဆွေးနွေးတင်ပြသွားပါ့မယ်။
နိုဝင်ဘာ ၁၉ ရက်နေ့ထုတ် သတင်းစာတွေမှာ ခုလို ဖော်ပြထားပါတယ်။ ဒီမိုကရေစီ တူဒေး မှာ “ နောက်လာမည့် လွှတ်တော်သက်တန်းမှသာ အခြေခံဥပဒေကို ပြင်ဆင် အတည်ပြုနိုင်တော့မည်။” ။ အလဲဗင်း သတင်းစာ ခေါင်းစဉ်မှာ “ ဖွဲ့စည်းပုံ အခြေခံဥပဒေ ပြင်ဆင်မှုများအား ၂၀၁၅ ရွေးကောက်ပွဲအပြီး ထွက်ပေါ်လာသည့် အဖြေအပေါ် မူတည်ကာ ဆောင်ရွက်ရမည် ဟု သူရဦးရွှေမန်း ပြောကြား” ။ မဇ္ဈိမ မျက်နှာဖုံးမှာ “ အခြေခံဥပဒေ ပြင်ဆင်ချက် ၂၀၁၅ အလွန်တွင်သာ လွှတ်တော် အတည်ပြုမည်ဟုဆို၊ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် သမ္မတ မဖြစ်နိုင်” ။ သည်ဗွိုက်စ် သတင်းစာမှာ “ အခြေခံဥပဒေ ပြင်ဆင်ရေး နောင်လာမည့် အစိုးရလက်ထက်၌သာ အတည်ပြုမည်” ။ စံတော်ချိန် သတင်းစာမှာ “ ဖွဲ့စည်းပုံ ပြင်ဆင်ရေး ၂၀၁၅ မေလ တွင် ပြည်သူ့ဆန္ဒခံယူမည်၊ ၂၀၁၅ ရွေးကောက်ပွဲပြီးမှ အခြေခံဥပဒေ ပြင်ဆင်သွားမည်ဟု ဆို။” ။ ဆဲဗင်းဒေး သတင်းစာမှာ “ ၂၀၁၅ ရွေးကောက်ပွဲပြီးမှ အခြေခံဥပဒေပြင်ရန် ဆောင်ရွက်နိုင်မည်ဟု ဦးရွှေမန်းပြော” ဆိုပြီး ဖော်ပြထားကြပါတယ်။
ဒါနဲ့ပါတ်သက်ပြီး ဖွဲ့စည်းပုံပြင်ရေး အချိန်ဇယားကို သူရဦးရွှေမန်းက ပြောရာမှာ လက်ရှိ ဖွဲ့စည်းပုံပြင်ရေး လွှတ်တော်ထဲမှာ ဆွေးနွေးနေတယ်၊ ဒါကို နိုဝင်ဘာ ၂၅ ရက်နေ့မှာ အပြီးဆောင်ရွက်မယ်၊ ထွက်ပေါ်လာမယ့် ပြည်ထောင်စု လွှတ်တော်က တင်သွင်းလာမယ့် ဥပဒေကြမ်းတွေကို နောက်လာမယ့် လွှတ်တော် အစည်းအဝေးတွေမှာ ဆုံးဖြတ် အတည်ပြုမယ်၊ အဲဒီက ထွက်ပေါ်လာတဲ့ ဥပဒေကြမ်းတွေကို တစ်ချို့ကိစ္စက ပြည်သူ့ဆန္ဒခံယူပွဲ လုပ်ရမယ်။ အဲဒါကို လာမယ့် ၂၀၁၅ မေလ အတွင်းမှာ ဆောင်ရွက်မယ်။ လို့ ဆိုထားပါတယ်။ ပြောရရင် ပြည်သူ့ဆန္ဒခံယူပွဲ လုပ်ပြီးပြီဆိုရင် ဖွဲ့စည်းပုံ ပြင်ရေးကိစ္စ လုပ်ငန်းစဉ် အဆုံးသတ်ပါပြီ။ အဲဒီ ပြင်ဆင်ထားတဲ့ ဖွဲ့စည်းပုံ ဘယ်နေ့ ဘယ်အချိန် အသက်ဝင်မလဲ ဆိုတာကိုလည်း အဲဒီ ဥပဒေကြမ်းတွေမှာ ပါပြီး ဖြစ်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဥပမာ အဲဒီ ပြင်ဆင်ပြီးဖြစ်သည့် ဖွဲ့စည်းပုံသည် ၂၀၁၅ ရွေးကောက်ပွဲ ပြီးနောက် ပေါ်ပေါက်လာမည့် လွှတ်တော်ဇ။် ပထမဦးဆုံး အစည်းအဝေး စတင်ကျင်းပချိန် အသက်ဝင်သည်၊ ဆိုတာမျိုး ဖြစ်ပါတယ်။ အဲဒါဆိုရင်တော့ ပြင်ဆင်ပြီး ဖွဲ့စည်းပုံဟာ ၂၀၁၅ ရွေးကောက်ပွဲ အပြီးနောက်ပိုင်း စ အသက်ဝင်လာမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
ဒါပေမယ့် သူရဦးရွှေမန်း ထပ်ပြောလိုက်တာတွေက အဲဒါကို ရှုတ်ထွေးသွားစေပါတယ်။ တစ်နေရာမှာ သူရဦးရွှေမန်းက “ ရွေးကောက်ပွဲအပြီး ထွက်ပေါ်လာတဲ့ အဖြေအပေါ် မူတည်ပြီး ဆောင်ရွက်ရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။” ဆိုတာမျိုး၊ သတင်းထောက် တစ်ယောက်က ထပ်ဆင့် မေးလိုက်တာကို သူက “ ၂၀၁၅ ခုနှစ်မှာ ရွေးကောက်ပွဲ လုပ်မယ်၊ ထွက်ပေါ်လာတဲ့အတိုင်း ရွေးကောက်ခံ ကိုယ်စားလှယ်တွေနဲ့ အတူပဲ လွှတ်တော်သက်တန်း စတဲ့ နောက်ပိုင်းမှာ အခုနက ဖွဲ့စည်းပုံ အခြေခံဥပဒေကို ပြင်နိုင်မယ့် ပြင်ဆင်ချက်တွေအပေါ် မူတည်ပြီးတော့ ဆက်လက် ဆောင်ရွက်သွားမှာ ဖြစ်ပါတယ်။” လို့ ပြောထားပြန်ပါတယ်။ ဒါကြောင့်လည်း သတင်းဌာန အသီးသီးဟာ ဖွဲ့စည်းပုံပြင်ရေးဟာ ၂၀၁၅ ရွေးကောက်ပွဲ ပြီးသည်အထိ မပြီးသေးဘူးလို့ ယူဆပြီး အထက်မှာ ဖော်ပြခဲ့တဲ့ ခေါင်းစဉ်တွေကို ရေးသားဖော်ပြကြတာ ဖြစ်ပါတယ်။
ဒါနဲ့ ပါတ်သက်ပြီး သူရဦးရွှေမန်း ပြန်ရှင်းလင်းဖို့ လိုတာက ၂၀၁၅ ရွေးကောက်ပွဲ အပြီး ပေါ်ပေါက်လာမယ့် လွှတ်တော် စ တာနဲ့ ပြင်ဆင်ပြီး ဖြစ်တဲ့ ဖွဲ့စည်းပုံ အသက်ဝင်မှာလား၊ ဒါမှမဟုတ် မပြီးပြတ်သေးတဲ့ ဖွဲ့စည်းပုံပြင်ရေး လုပ်ငန်းစဉ် ဆက်လုပ်ရမှာလား၊ ဒါမှမဟုတ် ၂၀၀၈ ဖွဲ့စည်းပုံအတိုင်းပဲ သမ္မတ ရွေးကောက်တင်မြှောက်တာတွေ၊ တိုင်းနဲ့ ပြည်နယ် ၀န်ကြီးချုပ် ခန့်အပ်တာတွေ လုပ်ပြီးမှ ဖွဲ့စည်းပုံ ပြင်ရေး ဆက် လုပ်ရမှာလား ဆိုတာပါ။ ရှင်းရှင်းပြောရရင် လာမယ့် ၂၀၁၅ ရွေးကောက်ပွဲအပြီး သမ္မတ ရွေးတာတွေ၊ ပြည်နယ်နဲ့ တိုင်း ၀န်ကြီးချုပ် ရွေးတာတွေ၊ တိုင်းနဲ့ ပြည်နယ်တွေရဲ့ လုပ်ပိုင်ခွင့် ကိစ္စတွေကို ၂၀၀၈ ဖွဲ့စည်းပုံနဲ့ လုပ်မလား၊ ပြင်ဆင်ပြီးဖြစ်တဲ့ ဖွဲ့စည်းပုံနဲ့ လုပ်မှာလား ဆိုတာ သူရဦးရွှေမန်း အနေနဲ့ ရှင်းရှင်းလင်း ပြောဆိုဖို့ လိုပါတယ်။
နောက်ပြသနာ တစ်ခုက ခုလို ဖွဲ့စည်းပုံ ပြင်ရေး အချိန်ဇယား ကိစ္စ၊ ဖွဲ့စည်းပုံကို ပြီးတဲ့အထိ ပြင်မလား၊ ၂၀၁၅ နောက်ပိုင်းအထိ ပို့လိုက်မလား၊ ပြင်ဆင်ပြီး ဖွဲ့စည်းပုံ ဘယ်အချိန် အသက်ဝင်စေမလဲ ဆိုတာတွေကို သူရဦးရွှေမန်း ပြောဆိုနေတာဟာ ကိုယ့်တစ်ယောက်ထဲ သဘောနဲ့ ပြောနေတာလား၊ လွှတ်တော်ရဲ့ သဘောထားလား ဆိုတာကိုလည်း ရှင်းလင်းဖို့ လိုပါတယ်။ တကယ်လို့ ကိုယ့်တယောက်ထဲ သဘောနဲ့ ပြောလို့ရတယ်၊ လုပ်ကိုင် ဆုံးဖြတ်လို့ရတယ် ဆိုရင် သူရဦးရွှေမန်းဟာ လွှတ်တော် အထက်က ပုဂ္ဂိုလ် ဖြစ်သွားပါလိမ့်မယ်။
နောက်ဆုံးတစ်ခုကတော့ ပုဒ်မ ၄၃၆ ပြင်ရေး ကာကွယ်ရေး ဦးစီးချုပ်နဲ့ သမ္မတ ဘက်ကသာ သဘောတူရင် အောင်မြင်ပြီ ဆိုပြီး ပြောခဲ့တာပါ။ တကယ်တော့ လွှတ်တော်ထဲ ၇ ရာခိုင်နှုန်းပဲ ရှိတဲ့ အင်န်အယ်လ်ဒီ က တင်တဲ့ ၄၃၆ ပြင်ရေးမူကို ၅၄ ရာခိုင်နှုန်းလောက်ရှိတဲ့ ပြည်ခိုင်ဖြိုးပါတီက သဘောတူသယောင်ယောင် ပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။ တကယ့်လက်တွေ့ အင်န်အယ်လ်ဒီ က တင်တဲ့ ၄၃၆ ပြင်ရေး၊ တနည်းအားဖြင့် တပ်မတော်သား အမတ်တွေ သဘောတူသည်ဖြစ်စေ၊ မတူသည် ဖြစ်စေ ဖွဲ့စည်းပုံကို ပြင်နိုင်ရေး ဆိုတဲ့ မူကို ပြည်ခိုင်ဖြိုးပါတီက သဘောတူတာ မဟုတ်ပါဘူး။ သူတို့ ၄၃၆ ပြင်မယ် ဆိုတာ မဖြစ်စလောက် လေးပါ။ လွှတ်တော်ကို လွှမ်းမိုးထားတဲ့ ကိုယ့်ပါတီက သဘောမတူနိုင်တဲ့ ကိစ္စတစ်ခု တပ်မတော်ဘက်ကသာ သဘောတူရင် အောင်မြင်ပြီလို့ သူရဦးရွှေမန်း ပြောလိုက်တာဟာ မှန်ကန်မှု မရှိပါဘူး။ အင်န်အယ်လ်ဒီ နဲ့ တပ်မတော်၊ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့ ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်၊ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့ သမ္မတ ဦးသိန်းစိန် အထင်အမြင်လွဲအောင်၊ ထိပ်တိုက်တိုးနေပြီးသားကို ပိုပြီးတင်းမာအောင် ပြောဆိုလိုက်သလို ဖြစ်နေပါတယ်။ ဒါကိုလည်း သူရဦးရွှေမန်းက ပြန်လည် ရှင်းလင်းပေးဖို့ လိုနေပါကြောင်း သုံးသပ်တင်ပြလိုက်ရပါတယ်။
BY YeYint Nge ... 11/20/20140comment
အထက (၇) အလုံမြို့နယ် ကျောင်း အုပ်ကြီး ဒေါ်အေးအေးမြင့်ရဲ. ပြောစကား
MEC မှစီမံကိန်းသတ်မှတ် လမ်းပိတ် ဆို့ထားသည့်အတွက်
ကျောင်းသား များ အဆင်မပြေဖြစ်၍ လမ်းပြန်လည်ရရှိရန်
တောင်းဆိုနေကြသည့် ကျောင်းသား/သူများ အား ၃ ရက်
ကျော်ကျောင်းမတက်ရင် ကျောင်းထုတ်မည် ။
ကလေးများဓါတ်ပုံကို ရိုက်ပြီးကျောင်းမှာ ကပ်ထားကာ
ကျောင်း ပျက်သောကလေးများ စာကူးမည်
ဆိုပါက စာကူးခွင့်မပြုရန် ပြောဆိုထားကြောင်းသိရှိရသည်။
ခင်ဗျားတို့ စိုက်တဲ့ပျိုးခင်း မှည့်ခဲ့ပြီ
Thetka Moe Nyo
အမှန်အတိုင်းပြောရရင်တော့ ကျွန်တော်တို့က ကိုယ့်အညွန့်ကိုယ် အချိုးခံခဲ့တာလေ။
ကျောင်းသားတွေ အမှတ်မမီလို့ အကျများရင် အအောင်မပေးပဲထားရမှာကို ဆရာကို ထုချေလွှာတောင်း၊ အောင်အောင်တင်ပေးမူကို လက်ခုပ်တီးခဲ့ကြတယ်။
ကျောင်းတက်ရက် ၇၅% မပြည့်ရင် ဖြေခွင့်မပေးပဲ နေရမှာကို ၅၀%လောက်အထိ ဆင်းဆယ်ရင်လည်း သဘောတွေ ကျခဲ့ကြတယ်။
ဆယ်တန်းမှာ မေးခွန်းပေါက်တယ်ဆိုတာကို တိုင်ဖို့ မစဉ်းစားပဲ မေးခွန်းပေါက်လေ့ရှိတဲ့ဘော်ဒါကို ပြုံထားကြတယ်။
ကန်တော့ရင် အဆင့်တိုးပေးတဲ့ဆရာမကို ဒဏ်ခတ်ဖို့ မစဉ်းစားပဲ သူများထက်သာအောင် ကန်တော့ကြတယ်။
ခုနစ်ရက်တက်ပြီး ဖြေရတဲ့အဝေးသင်မှာ ကျူရှင်တွေ အပြိုင်ဖွင့်တာတက်၊ စာမေးပွဲညမှာ အခန်းတံခါးဖွင့်ပြီး ခုံပေါ်မှာ ကူးရေးထားဖို့ ပိုက်ဆံပေးခဲ့ကြတယ်။
ခင်ဗျားတို့ စိုက်တဲ့ပျိုးခင်း မှည့်ခဲ့ပြီလေ.....
မျှတမှုမရှိဟု ﻿ဝေဖန်﻿ချက်﻿များထွက်﻿ခဲ့﻿သော နည်းပညာတက္ကသိုလ်﻿ ၏ ﻿အောင်﻿စာရင်းတွင်﻿ ကျရှုံးခဲ့﻿သော ﻿ကြောင့်﻿ မိမိ ကိုယ်﻿ကို အဆုံးစီရင်﻿ခဲ့သည့်﻿ မြန်မာ့ပညာရေး၏ မြေဇာပင်လေး ﻿မောင်﻿တင့်﻿လွင်﻿ အသက်﻿(20) နည်းပညာတက္ကသိုလ်(﻿မှော်﻿ဘီ) ၏ ဈာပနာ နှင့်﻿ ယင်း၏ မိခင်﻿သို့ ﻿နောက်﻿ဆုံး﻿ရေးခဲ့﻿သော စာ
ဇော်လင်း နဲ့ ဖြိုးဝေရေးတဲ့စာ
၀န်ကြီးချုပ်က ချပေးထားပြီးသားဂိတ်အား MEC ဦးပိုင်က သိမ်းယူ
ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး၊ ဆိတ်ကြီး ဦးမြ ငါးစင် သမ္မာန်ရေယာဉ်ဂိတ်ကို ၀န်ကြီးချုပ်က ချပေးထားပြီးသားဂိတ်အား MEC ဦးပိုင်က သိမ်းယူပိတ်ထား၍ အခြေခံကျောင်းသား
များ ကျောင်းမတက်နိုင်သည်မှာ ၃ ရက်ရှိပြီဖြစ်၍ ဆန္ဒပြနေကြစဉ်။
သတင်းဓါတ်ပုံ- Han Pa.
BY YeYint Nge ... 11/19/20140comment
သမ္မတ အကြံပေးတစ်ဦး၏ တူဆိုသူက ပြည်သူပိုင်လမ်းကို ခြံဝင်ခတ်
နိုင်ငံတော်သမတရုံးက တာဝန်ရှိသူများ ဖတ်ကြည့်ဖော်ထုတ်ပေးပါ
သမ္မတ အကြံပေးတစ်ဦး၏ တူဆိုသူက ပြည်သူပိုင်လမ်းကို ခြံဝင်ခတ်ထားဟုဆို ။
သုဝဏ္ဏမြို့နယ်၊၂၉ ရပ်ကွက် (အပိုင် ၁၄ နယ်မြေ) အတွင်းရှိ မြဧရာ လမ်းထောင့်ရှိ အများပြည်သူပိုင် မြေနေရာလွတ်ပေါ်တွင် နိုင်ငံတော် သမ္မတ၏ တူတော်စပ်သူဟု
ဆိုသူ တစ်ဦးမှ ခြံစည်းရိုးများ ခတ်ခြင်း၊ CCTVများ တပ်ခြင်းများကို ပေါ်ပေါ်ထင်ထင်
ပင် ပြုလုပ်ထားခြင်းတို့ကြောင့် ရပ်ကွက်နေ ပြည်သူများက ကျေနပ်မှု မရှိဖြစ်
အဆိုပါ ခြံခတ်ခြင်းကို လွန်ခဲ့သော ၃နှစ်ခန့်က စတင်ပြုလုပ်ခဲ့ခြင်း ဖြစ်ပြီး ယခင်က အဆိုပါလမ်းမှာ အများပြည်သူ သွားရောက်နိုင်ခဲ့သော်လည်း ယခုအခါတွင်
ယင်းခြံအတွင်းသို့ ၀င်ရောက်ပါက တာဝန်ရှိသူများ ခေါ်ကာမောင်းထုတ်ခြင်းများ
ပင် ရှိသည်ဟု ရပ်ကွက်နေသူ အချို့၏ ပြောကြားချက်အရ သိရသည်။
“သူတို့ ခြံခတ်တာကြာပါပြီ။ လွန်ခဲ့တဲ့ နှစ်နှစ် သုံးနှစ်လောက်ထဲက ကျွန်တော်တို့ လူငယ်တွေ ဘောလုံးသွားကန်တုန်းကဆို ရဲနဲ့ပါ ခေါ်ပြီးတော့ ဖမ်းတယ်”ဟု အ
သက် ၂၅နှစ် အရွယ်ခန့်ရှိ ၄င်းခြံအနီးတွင် နေထိုင်သူ တစ်ဦးက Tomorrowသို့
အဆိုပါ ခြံအတွင်းတွင် ပန်းပင်များ စိုက်ခြင်း၊ အလှပန်းအိုးကြီးများ ထားရှိထားခြင်း
တို့ကို ပြုလုပ်ထားပြီး၊ ခြံအတွင်းသို့ ၀င်ရောက်ပါက CCTVမှတစ်ဆင့် ကြည့်ရှုကာ လာရောက်သူကို လိုက်လံမေးမြန်းမှုများ ပြုလုပ်ခဲ့ခြင်းများ ရှိခဲ့ကြောင်းနှင့် အဆိုပါ
ခြံနံပါတ်မှာ (၂၃၀၊၂၃၁) ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
ယင်းနှင့်ပတ်သက်၍ ရပ်ကွက်ရှိ အုပ်ချုပ်ရေးမှူးရုံးမှ တာဝန်ရှိသူ တစ်ဦးကပင်
“ကျွန်တော် အဲဒီ ခြံခတ်တဲ့ ကိစ္စကို သွားပြောဖို့ ဓာတ်ပုံသွားရိုက်တယ်။ ဓာတ်ပုံ
သွားရိုက်တော့ ခြံထဲအထိ ၀င်ပြီး ရိုက်တာ။ ညနေလည်းကျရော ဖုန်းဆက်ပြီး
မနက်က အုပ်ချုပ်ရေးမှူး ဘာဖြစ်လို့ခြံထဲဝင်ပြီး ဓာတ်ပုံရိုက်တာလဲဆိုပြီး ခြံပိုင်ရှင်
က ဖုန်းဆက်ပြောတယ်”ဟ Tomorrowသို့ပြောသည်။
ထို့ပြင် ခြံပိုင်ရှင်မှာ နိုင်ငံတော်မှ အရေးပါသူတစ်ဦး၏ တူတော်စပ်သည်ဟု
ဆိုသော ဒေါက်တာ အောင်အောင်ဆိုသူ ဖြစ်သည်ဟု သတင်းများ ထွက်ပေါ်
နေပြီး၊ အနီးပတ်ဝန်းကျင်ရှိ ခြံများကိုလည်း ပြန်လည် တိုင်တန်းမှုများ ပြုလုပ်
နေသည်ဟု ရပ်ကွက်နေသူ တစ်ဦးက ပြောကြားခဲ့သည်။
“အရင်ကလည်း ကျွန်တော်တို့ ခြံဘေးမှာ ငမိုးရပ်ချောင်းထဲက သဲတွေမှုတ်
သွင်းတယ်။ ပထမတစ်ခါ မှုတ်သွင်းတော့ ကျွန်တော်တို့က တားတယ်။
ဒါပေမယ့် ထပ်သွင်းတယ်။ ကြာတော့ ကျွန်တော်တို့ အုတ်တံတိုင်း ပြိုကျသွား
ရတယ်။ အုတ်တံတိုင်း ပြိုတာကို ပြန်ပြင်ပေးပေမယ့် အခုထက်ထိ မပြီးသေး
ပါဘူး”ဟု ရပ်ကွက်နေသူ တစ်ဦးမှ ထပ်မံပြောသည်။
ယင်းအုတ်တံတိုင်း ပြိုကျမှုနှင့် ပတ်သက်၍ ရပ်ကွက်အုပ်ချုပ်ရေးမှူး ၀င်ရောက်
ဖြေရှင်းရာတွင်လည်း အာဏာဆန်ဆန် စကားလုံးများဖြင့် ပြောဆိုခဲ့ကြောင်း
လည်း အဆိုပါ ဖြစ်စဉ်နှင့် နီးစပ်သူ တစ်ဦးက ယင်း၏အမြင်ကို ပြောသည်။
ယင်းကဲ့သို့ လုပ်ရပ်များအပေါ် တိုင်ကြားခြင်း ရှိ/မရှိနှင့် ပတ်သက်၍လည်း
မေးမြန်းခဲ့ရာတွင် “သူက ဘယ်သူမှ ဂရုမစိုက်တဲ့ ပုံပါ။ သူ့ကိုတိုင်တယ်ဆိုရင်
သူကတောင် ဦးအောင်ပြန်တိုင်တဲ့ ကိစ္စမျိုးတွေ ရှိတယ်”ဟု အုပ်ချုပ်ရေးမှူးက
“သူ့ပတ်ဝန်းကျင်မှာရှိတဲ့ ဆောက်လုပ်ရေး လုပ်ငန်းတွေလုပ်ဖို့ကိုလည်း တိုင်တန်းတာတွေရှိတယ်။ အဲဒီဆောက်လုပ်ရေးလုပ်တဲ့ မြေကွက်တွေ
ကလည်း ပါမစ်ကျပြီးသားတွေပါပဲ”ဟု အိမ်နီးချင်း တစ်ဦးက ပြောကြားခဲ့သည်။
သတင်း- လျှမ်းလူ၊ Kမိုး ( Tomorrow )
ထိုင်းရဲ တွေကို မနက်ဖန်နောက်ဆုံး အပြီးသတ် လုပ်ဘို့ အမိန့်ပေး
" မနက်ဖန် မနက်ဖန် မနက်ဖန်"
ထိုင်းရဲ တွေကို မနက်ဖန်နောက်ဆုံး အပြီးသတ် လုပ်ဘို့ အမိန့်ပေးထားပြီ ဖြစ်လို့
ထိုင်းရဲတွေက မနက်ဖန် တင်ကို တင်ရမှာပါ။
အတင်း အကျပ် မဟုတ်တယုတ် လုပ်ရင်တော့ ငါတို့အစိုးရလည်း
ပဲခူးမြို.တွင် တရားမ၀င်တည်းခိုဝင်ရောက်နေသူ တရုပ်လူ...
တာမွေ ကြံ့ခိုင်ရေးက စည်းမှူး ရဲခေါင် (ခ) ကြူလွင် ...
အထက (၇) အလုံမြို့နယ် ကျောင်း အုပ်ကြီး ဒေါ်အေးအေးမြင...
၀န်ကြီးချုပ်က ချပေးထားပြီးသားဂိတ်အား MEC ဦးပိုင်က...
သမ္မတ အကြံပေးတစ်ဦး၏ တူဆိုသူက ပြည်သူပိုင်လမ်းကို ခြ...
ထိုင်းရဲ တွေကို မနက်ဖန်နောက်ဆုံး အပြီးသတ် လုပ်ဘို့...